July 2012 ~ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
သွေးစည်းခိုင်မာရေးအတွက် အဆင့် ၄ဆင့်ပါ လမ်းပြမြေပုံ KKO ထုတ်ပြန်
Tuesday, July 31, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
အမျိုးသားသွေးစည်းခိုင်မာရေးကို ရှေးရှု၍ ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်သွားမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အများပြည်သူလူထု သိရှိရန် အမျိုး သားလွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး စသည့်အဆင့် ၄ဆင့်ပါသည့် လမ်းပြမြေပုံကို ကလိုထူးဘော ကရင်အစည်းအရုံး(KKO)မှ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
KKO ထွေထွေအတွင်းရေးမှူး စောဂုဏ်အောင်က “တဆင့်ချင်း လုပ်သွားမယ့်နေရာမှာ ပတ်သက်နေတဲ့ ကရင်အချင်းချင်းကိုလည်း အသိ ပေးချင်တယ်။ လူမျိုးစုတွေအားလုံးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အပါအဝင် လက်ရှိအာဏာရထားတဲ့ အစိုးရကိုလည်း အသိပေးချင်တဲ့အ နေနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ”ဟု ပြောသည်။
ကရင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ ဘာသာ၊ မျိုးနွယ်စု၊ ဒေသ၊ ကျား-မ မရွေးဘဲ ကရင်အမျိုးသားများ၏ သွေး စည်းခိုင်မာမှု တည်ဆောက်ရေး၊ ကရင်အမျိုးသားနှင့် ဘဝတူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ သွေးစည်းခိုင်မာရေး၊ ကရင်အမျိုးသားများနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ သွေးစည်းခိုင်မာရေး၊ ကရင်အမျိုးသားများ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် ယနေ့ အာဏာရ အုပ်ချုပ်သူများ သွေးစည်းခိုင်မာရေး စသည့်အဆင့် ၄ဆင့်တို့ကို ယင်းလမ်းပြမြေပုံတွင် ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ စောဂုဏ်အောင်က “KKO အနေနဲ့ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာသာရေးပေါ်မှာ အခြေမခံဘူး။ ကရင်မျိုးနွယ်စု တွေ ဘယ်လောက်ပဲကွဲကွဲ၊ စာတွေဘယ်လိုပဲရှိရှိ ကရင်အလံတော်အောက်မှာ အားလုံး စုစုစည်းစည်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ အမြင်ချင်းမတူ တာတွေကိုတောင် ဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ အမြင်ချင်း တူတာတွေကို လက်တွဲလုပ်ဆောင်မယ်”ဟု ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
၎င်းတို့ KKO အနေဖြင့် အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများအဖြစ် ကွန်ပြူတာသင်တန်းပေးခြင်း၊ ဆေးသင်တန်းပေးခြင်း၊ ဆေးရုံဆောက်လုပ်ပေး ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို စတင် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း KKO က ဆိုသည်။
တစ်ဆက်တည်း၌ပင် ကရင်အချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွှတ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ လာမည့် သြဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၆၂နှစ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုလည်း KKO ရုံးစိုက်ရာ ကော်သူးမွဲခီး(ဆုံဆည်းမြိုင်) တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KKO သည် တိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီကရင့်အမျိုးသားတပ်မတော် (DKBA)ကို နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု ပြုနိုင်ရန်နှင့် အများအကျိုးပြုလုပ် ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
PNLO ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ေခၚေတြ႔ၿပီးကာမွ အစိုးရက ထပ္မံေရႊ ႔ဆိုင္း
ၾသဂုတ္လ တတိယ အပါတ္မွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ႏိုင္မည္ဟု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ ဒုဥကၠဌ ဦး ေအာင္မင္းမွ ခ်ိန္းဆို လိုက္သျဖင့္ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႔၌ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႔၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ပအို႔၀္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (PNLO) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစီစဥ္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ရသည္ဟု ဥကၠဌျဖစ္သူ ခြန္ဥကၠာက ဆိုပါသည္။
“ သြားတုန္းကေတာ့ အပစ္ရပ္ေရးကို ေတာင္ႀကီးက ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဦးေအာင္မင္းက မအားဘူး ဆိုျပီး ျဖစ္သြားတယ္ေလ။ အခ်ိန္ေနရာ အတိအက်ကိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္းက်မွဘဲ ထပ္ခ်ိန္း က်မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ျမင့္ထြန္း ဦးေဆာင္တဲ့ က်ေနာ္ အဖြဲ႔ကေတာ့ ေလ့လာ ေရး ခရီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ရတယ္ေပါ့” ဟု ဆိုပါသည္။
အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔ အဖြဲ႔သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ မထိုးႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ယေန႔ ညေနပိုင္း၌ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႔သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ မေဆြးေႏြးရသည့္ အတြက္ PNLO အဖြဲ႔သည္၊ ေတာင္ၾကီး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုျမိဳ႔နယ္ဖက္၌ရွိ ေသာ ပအို၀္နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ ပအို၀္႔ဆရာေတာ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသူသားမ်ားႏွင့္ ပအို၀္႔ ျပည္သူမ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုျပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သ ေဘာထား အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ခဲ့သည္ဟု ဦးခြန္ဥကၠာက ဆိုပါသည္။
PNLO ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ျပီးခဲ႔သည့္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ ေကာက္ျမိဳ႔၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုစဥ္ မူအာျဖင့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို သေဘာတူထားပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီး ျမိဳ႔သို႔ သြား ျပီး တရား၀င္ လက္မွတ္ ထိုးရန္ ရွိေနပါသည္။ ဤအေျခအေနကို ဦးေအာင္မင္းတို႔ဘက္မွ မအားလပ္သျဖင့္ PNLO အဖြဲ႔ ျပန္လာ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
PNLO အဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စ၀္ေအာင္ျမတ္၊ နယ္နယ္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သူ တို႕ အဖြဲ႔ နွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ပါသည္။ PNLO ဖက္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ျမင့္ထြန္း ဦးေဆာင္ျပီး ဗိုလ္မွဴးခြန္ သူရိန္၊ ဦးထီးေဆာင္၊ ဦးတင္ေရႊဦး၊ ခြန္ထြန္းတင္ႏွင့္ ရံုးအဖြဲ႔၀င္ ႏွစ္ဦး ပါ၀င္သည္။
ဥၤီးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔သည္ PNLO ပအို၀္႔အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အလြတ္သေဘာ အားျဖင့္ ၃ ၾကိမ္ တိုင္တိုင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ဇူ လိုင္၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးရန္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းအဖြဲ့ခ်ဳပ္နွင့္ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းတုိ့ အပစ္ရပ္ေရး အၾကိုေဆြးေနြး
ပအိုဝ္းအမ်ိုးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဗိုလ္မႉးၾကီး ခြန္သူရိန္ အပါအ၀င္ အဖြဲ့၀င္ ၇ ဦးဟာ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းေရာက္႐ွိေနျပီး ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ေန့ က ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒ မီးရထား ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းနဲ့ ေတြ့ဆုံေဆြးေနြးခဲ့ပါတယ္။
ဒီေတြ့ဆုံမႈဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမလုပ္ခင္ အၾကိုေဆြးေနြးတာျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းကုိ သြားေရာက္ေလ့လာတာလုိ့ ပအိုဝ္းအမ်ိုးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ့ခ်ဳပ္ရဲ့ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ၁ ဗုိလ္မႉးၾကီး ခြန္သူရိန္က ေျပာပါတယ္။
“ဦးေအာင္မင္းနဲ့ အီးဂရက္က တာ၀န္႐ွိတဲ့ ပုဂၢိုလ္ေတြနဲ့ ေတြ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ ေဆြးေနြးခဲ့ၾက တာကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၂၇ ရက္တုန္းက ဘန္ေကာက္မွာ ေတြ့ခဲ့တဲ့ အဆက္ပါ။ အဲဒီမွာ ေတြ့တုန္းက အဲဒီမွာ ေဆြးေနြးခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကို ထပ္မံေဆြးေနြးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မျပီးသတ္ေသးပါ ဘူး။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လမွာ ေနာက္တေခါက္ ထပ္ေတြ့မယ္။ အဓိကေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မလုပ္ေသးမီ ကာလမွာ က်ေနာ္တို့က ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေနအထားေလးေတြကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာတဲ့ သေဘာပါပဲခင္ဗ်။ အဲဒီေလ့လာမႈကေန ေဆြးေနြးၾကတဲ့ သေဘာပါပဲဗ်။”
ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းတုိ့အဖြဲ့ဟာ ခရီးစဥ္အတြင္း သထုံျမို့ကုိလည္း ၀င္ေရာက္ျပီး ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိ ဖူးေျမာ္ခဲ့ၾကသလုိ အန္အယ္လ္ဒီ႐ုံးကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ တာခ်ီလိတ္ျမို့ကုိလည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကရာမွာ အရင္ကနဲ့မတူတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ေတြ့ခဲ့ရတယ္လုိ့ ဗိုလ္မႉးၾကီး ခြန္သူရိန္က ဆုိပါတယ္။
“ရန္ကုန္ကေန ဒီမနက္ ၁၁ နာရီက ထြက္ခြာျပီး က်ေနာ္တို့ တာခ်ီလိတ္ျမို့ကို ေရာက္ေနပါျပီ။ တာခ်ီလိတ္ျမို့ကို ၀င္ေရာက္ ေလ့လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေလးေတြေတာ့ က်ေနာ္တို့ ေတြ့ရပါတယ္။ ဥပမာ ဟိုးအရင္တုန္းက လြတ္လပ္မႈ မ႐ွိတဲ့ ဆနၵေဖာ္ထုတ္မႈ ကိစၥေတြလိုဟာမ်ဳိးေတြ ေတြ့ရပါတယ္။ ေနာက္တခုက တစခ်င္း တစခ်င္း သြားရမယ္ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေလး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေလး ေျပာဆို ေဆြးေနြးတဲ့ ဟာမ်ဳိးလည္း ေတြ့ရပါတယ္။”
အခုလို ဆနၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြ ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပးလာတဲ့ အေပၚကုိလည္း ေကာင္းတဲ့လကၡတရပ္အျဖစ္ ျမင္တယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။
“ဒါက ေကာင္းတဲ့လကၡဏာအစပိုင္းလုိ့ ျမင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ရဲ့ မတူကြဲျပားျခားနားမႈေတြကုိ ရပ္တည္ခြင့္ေပးရမယ္။ ျပိုင္ဘက္ေတြကုိ ႐ွင္သန္ခြင့္ ေပးရမယ္။ ျပိုင္ဘက္သိခြင့္ ႐ွိရမယ္။ ဒါေတြက တကယ့္ဒီမုိကေရစီရဲ့ အသြင္သဏၭာန္ပါပဲ။ အခု ဒီလုိမ်ိုး စတင္ျပီးေတာ့ လႈပ္႐ွားခြင့္ေလးေတြ စု႐ုံးခြင့္ေလးေတြ ရလာတယ္ဆုိတာကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈရဲ့ အစပိုင္း ေျခလွမ္းေကာင္းေသာ လကၡဏာပဲလုိ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
ပအိုဝ္းအမ်ိုးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း အပါအ၀င္ အဖြဲ့၀င္ ၇ ေယာက္ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံထဲကုိ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန့က ေရာက္႐ွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမို့က ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ့ေတြ၊ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္႐ွားသူေတြ၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြနဲ့ ေတြ့ဆုံခဲဲ့ပါတယ္။
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့၏ ရာဇသံကို SSA-N က အာခံသည်
Monday, 30 July 2012 18:01
Written by ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန
ဇူလိုင် (၂၆) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရက် အဖြစ် ထားပြီး ရာဇသံ ပေးခဲ့သည့် နမ့်မဂွင်မှ ဆုတ်ခွာပေးရန် ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ (SSPP/ SSA-N) အား အမိန့်ပေး ထားခြင်းကို ယနေ့အထိ အာခံနေဆဲဖြစ်သည်ဟု အမည် မဖေါ်လိုသည့် SSA-N ဗိုလ်မှူးကြီး တဦးက ပြောပါသည်။
“ အပစ်ရပ်တုန်းကတော့ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေကြလို့ သဘောတူထားတယ်။ နောက်မှ တန့်ယန်းနဲ့ မိုင်းရှူးက ကျနော်တို့ နေရာကို အကြောင်းမကြားဘဲနဲ့ အရင်ဝင်တိုက်တယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ နှစ်ကြိမ်တိုင် ၀င်တိုက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ စခန်း (၃) နေရာ စလုံး ဆုတ်ပေးရပါတယ်။ ဒါတောင် မပြီးသေးဘူး။ အဲဒီ (၂၆)ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ နမ့်မဂွင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျ နော်တို့ တပ်ဖွဲ့တွေကို ထပ်ဆုတ်ခိုင်းပြန်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ ကျနော်တို့ ဗဟိုကနေ လုံးဝမဆုတ် ရဘူးလို့ အမိန့်ထုတ် ခဲ့ တယ်။ ။ အဲဒီလိုလည်း ထုတ်လိုက်ရော အခုရက်ချိန်း လွန်သွားတာတောင် သူတို့က ဆက်မတိုက်တော့တာ တွေ့ရပါတယ်”
နမ့်မဂွင် ဆိုသည်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဖက်၊ လားရှိူးမြို့တောင်ဖက်နှင့် မိုင်းရယ်မြို့နယ်၏ မြောက်ဖက်၌ ရှိသော နယ်မြေကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနေရာတွင် SSA-N ၏ တပ်မဟာ (၁)ဧရိယာနှင့် ကချင်ပြည် လွတ်မြောက် အဖွဲ့(KIA) ၏ တပ်မဟာ (၄) ဧရိယာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပလောင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (PSLO) တပ်ဖွဲ့တို့ လှုပ်ရှားနေသော ဧရိယာလည်း ဖြစ်ပါသည်။
SSA-N နှင့် အစိုးရဆွေးနွေးစဉ်
ဤအခြေအနေတွင် SSA-N သည် နောက်ဆုတ်ပေးတော့မှာ မဟုတ်သည့် အတွက် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် အပစ် အခတ်ရပ် စဲရေးကို တမင်ဖျက်ဆီးရာ ရောက်မှာကို စိုးရိမ်ဟန်ရှိသည့်အတွက် ဆက်မတိုက်တော့ဘဲ တမင် ရပ်စဲလိုက်ဖွယ် ရှိသည်ဟု ဝေဖန်သူများက ဆိုပါသည်။
SSA-N သည် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မိုင်းရှူး၊ မိုင်းယန်း၊ သီဘော၊ မန်ဖန်နှင့် မိုင်းရယ် မြို့နယ်များ၌ လှုပ်ရှားနေပြီး၊ ၀မ်းဟိုင်း၌ ဌာန ချုပ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် SSA-N သည် “၀” ပြည် သွေးစည်း ညီည့တ်ရေး ပါတီ အပါ၀င် မိုင်းလား အဖွဲ့တို့နှင့်လည်း မဟာမိတ် ဖွဲ့ထားပါသဖြင့် ၄င်းတို့ လျို့ဝှက် ဌာနချုပ် စခန်းကို “၀”နှင့် မိုင်းလား ဖက်၌လည်း ထားရှိခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ SSA-N ဗိုလ်မှူးကြီးက ဆိုပါသည်။
အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသား အပေါ် သဘောထားသည် သစ်ဆန်းမှု မရှိဟု နေပြည်တော် အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ သဘောထားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိသာနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်သူများက ဆိုပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် အစိုးရ သည် တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို မကြေညာသည့်အပြင် နည်းဗျူဟာ သစ်ခင်းပြီး၊ အပစ်ရပ်သော အဖွဲ့၊ အပစ်မ ရပ်သောအဖွဲ့နှင့် ချေမှုန်းသင့်သော အဖွဲ့ဟူ၍ အမျိုးမျိုး သွေးခွဲထားပြီး အချိန်အခါပေါ်မူတည်၍ အားလုံးကို ချေမှုန်းသွားလိမ့် မည်ဟု အကဲခတ်များက ဆိုပါသည်။
ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားေနထိုင္ရန္ ယာယီတဲစခန္း လံုေလာက္မႈမရွိ
Monday, July 30, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
စေနေန႔၊ ေမလ 05 ရက္ 2012 ခုႏွစ္ ေကအုိင္စီ သတင္း - ေကအိုင္စီ
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲ အေျခအေနေၾကာင့္ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား မိုးတြင္းေန ထိုင္ရန္ ယာယီတဲ၊ အေဆာက္ အအံုမ်ားအတြက္ အကူအညီ လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
မိုးတြင္းေရာက္လာၿပီးျဖစ္၍ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ခိုလႈံေနထိုင္ သြားရန္ ယာယီ တဲအိမ္ အမ်ားအျပား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ တာဝန္ခံ မြန္းေနလီက ေျပာသည္။
မြန္းေနလီက “အစားအေသာက္က လံုေလာက္မႈမရွိေပမယ့္ မွ်ေဝစား ေသာက္သြားၾကတာေပါ့။ အခု အဓိက လိုအပ္ေနတာက ေနဖို႔ ထိုင္ဖို႔ ယာယီတဲအိမ္ေတြျဖစ္တယ္။ မိုးတြင္းလည္း ေရာက္လာၿပီးဆိုေတာ့ အဲဒါက အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာတယ္၊ တခ်ဳိ႕ အရင္က လုပ္ထားတဲေတြကလည္း ပ်က္ကုန္ၿပီး။ ေလတိုက္လို႔ၿပိဳ က်တာလည္းရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။
လက္ရွိ တိုက္ပြဲအေျခအေန ျပင္းထန္လာေနျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္အတြင္း ဒုကၡသည္ စုစု ေပါင္း ၇ေသာင္းေက်ာ္ ျဖစ္လာကာ ယာယီ တဲအိမ္အျပင္ ေသာက္သံုးေရ၊ ေဆးဝါး အကူအညီမ်ားလည္း အေရးေပၚ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ သည္။
၎က “ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြက ၇ေသာင္းေက်ာ္ေနၿပီး။ ေတာထဲ ေရာက္ေနတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္၊ သူတို႔ က တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းထိ မသြားေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ေတာထဲမွာပဲ ခိုလႈံတိမ္းေရွာင္ေနၾကရတယ္။ ဘာအကူအညီမွလည္း မေရာက္ဘူး”ဟု ဆိုသည္။
အဆိုပါ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အကူအညီ လာ ေရာက္ေပးေနေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအ ညီမ်ား ဆက္လက္ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း ေမလ ၁ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
KIO သည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစၿပီး အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားကာ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ခတ္မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသခံ လူထု ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္သည္။
အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား မေမ့ၾကရန္ KDNG သတိေပး
Thursday,3May 20123 Comments
ေမလ ၃ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)
အစိုးရႏွင့္ KIO အပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသည့္အျဖစ္ကို သင္ခန္းစာယူၾကရန္ ကခ်င္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕(KDNG) က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား သတိေပးလိုက္သည္။
ယမန္ေန႔က ကခ်င္“ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး”မွ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ KDNG မွ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ KIA တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ျဖစ္ေနျခင္းအျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး ၀ါး ျဖန္႔ေ၀သံုးစဲြျခင္း၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ပိုမ်ားလာျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္းမ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ KDNG ဒုဥကၠဌ စာဂ်ီက “ဒီလိုမ်ိဳး ထုတ္ေဖာ္ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္ သူအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အတိက္က ျဖစ္ပ်က္ခံစားေနရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မေမ့အပ္တဲ့ သခၤန္းစာကို ကခ်င္ျပည္သူေတြ သိလာမယ္။ တျခားတိုင္းရင္းသားညီအကိုေတြလည္း သိေစခ်င္တဲ့အေနနဲ႔ပါ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈကို KIO မွ ၁၇ႏွစ္ၾကာ သေဘာတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အစိုးရမွ ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း မရွိခဲ့သည့္အျပင္ ယခုအခါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ နည္းစနစ္မက်ေသာ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း၊ ေခါင္းပံု ျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ျခင္း ျပႆနာမ်ား ပို၍ဆိုးရြားလာေနသည္ဟု KDNG ဒုဥကၠဌက ဆက္ေျပာသည္။
“ကခ်င္လူထုေတြ အတိတ္က ခါးသီးလွတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေတြကလည္း ကခ်င္ ျပည္သူမ်ားခံစားခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳလို ထပ္မခံစားရေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေအာင္ ေရရွည္တည္ တ့ံခိုင္ၿမဲတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တကယ္ပဲ လိုအပ္ေနတာကို သတိထားသင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ယခင္အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရတပ္မ်ား လာေရာက္စခန္းခ်ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးသစ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား မတရားခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း အပါအ၀င္ စစ္အာဏာပိုင္၏ အေပါင္းေဖာ္ျဖစ္သူ အႀကီးစား စီးပြားေရးသ မား ေဌးျမင့္ႏွင့္ ၎ပိုင္ ယုဇနကုမၸဏီမွ ဟူးေကာင္းေက်းရြာရွိ ျပည္သူတို႔အား ေနရပ္မွ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစကာ ေျမဧက ၂၀၀,၀၀၀ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးက်ားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွ သဘာ၀ေလာင္စာဆီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ တသီးစားအပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ရွာတာပူႏွင့္ ဒူကေထာင္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရွိ မိသားစုတိုင္း ဘိန္းစြဲေ၀ဒနာ ခံစားေနၾကရသလို ဟူးေကာင္းေက်းရြာရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ကိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္မူ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ သတၱဳလုပ္သား ၈၀% မွာ ဘိန္းမဲစြဲေနၾကၿပီး မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း ရာဇ ၀တ္မႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားျခင္းမ်ားႏွင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးရံုမ်ား တိုးပြားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခုခံအားက်ဆင္းသည့္(HIV/AIDS) ေရာဂါ ပိုမို ျဖစ္ပြားလာသည္ ဟု ၎အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။
KDNG သည္ ၂၀၀၅မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူမႈဒုကၡဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို သုေသသနျပဳခဲ့ၿပီး သက္ ဆိုင္ရာ ေဒသခံလူထု ၃၀၀ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယို႐ိုက္ယူျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ အေမွာင္လြမ္းေနေသာခ်ဳိင့္၀ွမ္း (Valley of Darkness)၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း (Damm-ing The Irrawaddy)၊ ေရဖံုးလႊမ္းျခင္းကို ခုခံတားဆီးျခင္း(Resisting of The Flood)၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သူေဌးမ်ားႏွင့္ က်ားမ်ား (Ty-rants, Tycoons and Tigers) ႏွင့္ Blood Jade စသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢက အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ ေပးမည္ဆိုသည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္အား ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) က ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။
လုိင္ဇာေဒသတြင္ ေတြ႔ရေသာ ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကေလးတဦး (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)
စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ လူ႔သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အရင္က ေျပာခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးနဲ႔တျခား လိုအပ္တဲ့ အရာေတြအားလံုး အကူအညီ ဆက္ေပးသြားပါမယ္” ဟု မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ဆိုသည္။
KIO တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးလနန္က “ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းကေနၿပီးေတာ့ လူ႔သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီအတြက္ လုပ္ေနၾကပါၿပီ၊ ဆက္ၿပီေတာ့ ကူညီေပးမယ္ဆိုေတာ့ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြသာ မကပါဘူး၊ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ဒီမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္မွာပါ” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆန္၊ ေသာက္ေရသန္႔၊ အမိုးအကာ စသည့္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔တခ်ဳိ႕က ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ လိုင္ဇာေဒသသို႔ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္၍ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံု၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက “ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အထေျမာက္ဖို႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး႐ံုတင္ မကဘူး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါ တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔ အနီးကပ္ဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
ယမန္ေန႔က လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ေဒသအတြင္း အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၂ နာရီ အၾကာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း ဦးလနန္က ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က စတင္၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တာပိန္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာအနီး တပ္စြဲ ထားသည့္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ အစုိးရတပ္က ဖယ္ရွားခုိင္းရာမွ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕စသည့္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၂ ေသာင္းခြဲခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
KIO သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလည္း ပ်က္ျပားခဲ့သည္။
ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ KIO သံသယရွိ
ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ေမလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၃၈ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ) ။ ။ ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔က ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိမ်ားထံ တင္ျပမႈ ရွိမရွိ သံသယဝင္ေနေၾကာင္း KIO ေျပာခြင့္ရသူ ဦးလနန္က ေျပာသည္။
“အမွန္တကယ္ အထက္ကို တင္ျပမႈ ရွိသလားဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခုတေလာ စံုစမ္းရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ အထက္ပုိင္း လူၾကီးေတြ က်ေနာ္တို႔ KIO က တင္ျပတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္ သံုးဆင့္ကုိ မၾကားသိရဘူးဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ သံုးၾကိမ္တုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား
ေနရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း “ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းေတြမွာက ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြ ပုိၿပီးေတာ့
ျပင္းထန္လာတယ္။ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ မေရာက္ေပမယ့္ တဖက္နဲ႔တဖက္ ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္၊ ေလးေလး စားစား ရွိလာဖုိ႔ကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ေပးတဲ့ လူေပၚမွာ အမ်ားၾကီး မူတည္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဦးလနန္ က ေျပာသည္။
ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔က ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO မွ ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိမ်ားထံ တင္ျပမႈ ရွိမရွိ သံသယဝင္ေနေၾကာင္း KIO ေျပာခြင့္ရသူ ဦးလနန္က ေျပာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔သစ္ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိအဖြဲ႔သစ္တြင္ ၎ ပါဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္း က ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆုိ ထားသည္။
KIO မွ တင္ျပသည့္ အဆင့္ သံုးဆင့္ ဟူသည္မွာ ပဏာမ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္တြင္ ႏွစ္ဘက္တပ္စခန္းမ်ား ကိစၥကို ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈရသည္အထိ ေဆြးေႏြးသြားရန္၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ပင္လံုကဲ့သို႔ ညီလာခံတရပ္ က်င္းပ၍ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ အတည္ျပရန္ႏွင့္ ထိုသေဘာတူညီမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားၾကရန္တို႔ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ KIO အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထပ္မံေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ေနရာ ညွိႏႈိင္းေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး KIO ဘက္မွ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ဂ်ယ္အနီးရွိ ပရန္ဝမ္ေက်းရြာတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ တင္ျပထားမႈကုိ အစုိးရဘက္က သေဘာတူညီမႈ မရွိသလုိ၊ အစုိးရဘက္က တင္ျပထားသည့္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ ကုိလည္း KIO က ျငင္းဆုိထားသည္။
တုိက္ပြဲအေျခအေန အစုိးရတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေမလ ၂ ရက္ေန႔ တရက္တည္းတြင္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ KIO လုိင္ဇာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲ ငါးၾကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု KIO မွ ဦးလနန္က ေျပာသည္။
ေမလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက KIO၏ တပ္မဟာ ၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၃ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ျမစ္ၾကီးနား-လုိင္ဇာ ကားလမ္းေပၚရွိ ဂါးရားယန္ေက်းရြာ အနီးမွ ဝူေထာ္ကုန္းဘက္ အစုိးရတပ္ရင္း ၈၈ နည္းဗ်ဴဟာ ၁ မွ တက္လာသည့္ စစ္ကား သံုးစီးမွ ႏွစ္စီးကုိ ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ ဒုစစ္ေၾကာင္းမႉး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္ဟု သူက ဆုိသည္။
ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာအနီး အစုိးရတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ား တုိက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထုိေက်းရြာအနီးရွိ အနီး အဇီးလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ ရြာတရြာကုိ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။
ပန္ဝါၿမိဳ႕အေျခစုိက္ထားသည့္ ဗုိလ္ၾကီး Waw Lau ဦးေဆာင္သည့္ နံပါတ္ ၁ဝဝ၂ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ရန္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဗ်ဴဟာမႉး ဗုိလ္မႉးၾကီး မ်ဳိးတင္ က ညြန္ၾကားခဲ့သည္ဟု KIO ေရွ႕တန္းမွ ရဲေဘာ္တဦးက ေျပာသည္။
“ေမ ၁ ရက္ေန႔ စည္းေဝးလုပ္ၿပီး BGF က KIA ရွင္းလင္းေရးလုပ္။ အခုတေလာဘဲ ေရာက္တဲ့ စစ္ေၾကာင္းက လမ္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရးလုပ္ပါလုိ႔ ေျပာၿပီး က်ီးက်န္ဆုိတဲ့ ရြာဘက္ကုိ ျပန္သြားတယ္”ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေနသည့္ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳက်င့္ေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရေသာ္လည္း မဇိၥ်မက သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
ေကအိုင္အိုနဲ့ အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ့သစ္ တြေ့ဆုံ
မျကာေသးခင္ကမွ ျပန္လည္ဖြဲ့ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ့နဲ့ ကခ်င္ လြတ္ျေမာက္ေရးအဖြဲ့(KIO) တို့ ပထမဆုံး အျကိမ္ အျဖစ္ ထိုင္းနယ္စပ္ျမို့ တေနရာမွာ တြေ့ဆုံဆြေးနြေး ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ျဖစ္တဲ့ မီးရထားဝန္ျကီး ဦးေအာင္မင္းနဲ့ KIA ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ုပ္ ဗိုလ္ခ်ုပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ့တို့ဟာ ေမလ ၂၁ ရက္ေန့ တနင္္လာေန့မွာ ထိုင္းနိုင္ငံ ျေမာက္ပိုင္း ခ်င္းရိုင္းျမို့မွာ နွစ္ဖက္တြေ့ဆုံ ဆြေးနြေးခဲ့ ျကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတြေ့ဆုံဆြေးနြေးမွုနဲ့ ပက္သက္ျပီး ေကအိုင္အို ဘက္ကေတာ့ အလြတ္သေဘာ တြေ့ဆုံ မိတ္ဆက္တဲ့ အေနအထားပဲ ျဖစ္တယ္လို့ အစည္းအေဝးပြဲမွာ ပါတဲ့ ေကအိုင္အို အထြေထြေ အတြင္းေရးမွူး ေဒါက္တာ လဂ်ာက ဘီဘီစီကို ျေပာပါတယ္။
နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အေနနဲ့ တြေ့ဆုံဖို့ ျေပာဆို ဆြေးနြေးေပမယ့္လဲ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာ ျပုလုပ္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ တိတိက်က် မသတ္မွတ္ရေသးဘူးလို့ ေဒါက္တာလဂ်ာက ျေပာပါတယ္။
ဒီဆြေးနြေးပြဲကို မီးရထားပို့ေဆာင္ေရး ဝန္ျကီး ဦးေအာင္မင္းအျပင္ ဦးခင္ရီနဲ့ ဦးစိုးသိန္းတို့ ပါဝင္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိုးေဆာင္အဖြဲ့ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာ၊ ဦးခရာ ခြန္းေအာင္တို့ ပါဝင္ တက္ေရာက္တယ္လို့ သိရပါတယ္။
ေကအိုင္အိုနဲ့ အစိုးရတို့ဟာ နွစ္ဖက္ျကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို့အတြက္ အျကိမ္ျကိမ္ တြေ့ဆုံ ဆြေးနြေးခဲ့ျကရာမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္တဲ့ အရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ့နဲ့ မတ္လ မွာ ေနာက္ဆုံး တြေ့ဆုံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ တစုံတရာ မရရွိခဲ့တဲ့အျပင္၊ တိုက္ပြဲတြေဟာ ဆိုရင္ အရင္ကထက္ ပိုမို ျပင္းထန္လာျပီး ေန့စဉ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါတယ္။
ဒါျေကာင့္ ေနာင္မွာ ျပုလုပ္မယ့္ ဆြေးနြေးပြဲတြေမွာေတာ့ အစိုးရရဲ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက အျကီးအကဲ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ဆြေးနြေးမွုတြေ ျပုလုပ္နိုင္မယ္လို့ မ်ွော္လင့္ျေကာင္း ေဒါက္တာလဂ်ာက ျေပာပါတယ္။
Kachin peace making news
KIO refuses to hold peace talks in gov’t-controlled area
Burma army shoots Kachin preacher in the knee
Kachin army takes control of key Burma army post on Putao route
70,000 Kachin refugees in desperate need
NDA-K's Ting Ying declares Burma army will wipeout KIA
China issues warning to citizens
Burmese army reinforces troops in Kachin State
12 Burma soldiers die in KIA attack in southern Kachin state
Photo essay: Myanmar's Kachin rebels
CPI head meets relocated villagers to win their support for Myitsone dam
Burma Army making war on Kachin to protect “foreign” interests
Kachin leader wants Japan to join Myanmar peace process
Massive displacement of local residents towards Tengchong County in China.
The UNFC dialogue with the government would address KIO issue
To See if the New Burma Can Be Trusted, Ask the Kachin as They Face Ethnic War
Reform process in Burma marred by war in Kachin State
KIO ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား
KIO ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း(7)ခုျဖစ္ပါတယ္။
CNF ရဲ့ ရုံးခွဲကိစ္စ ထုတ်ပြန်ချက်
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ အစိုးရသစ်နဲ့ အပစ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF က တီးတိန်မြို့နယ်ထဲမှာ ရုံးတွေဖွင့်မယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်ဆောင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
မတူပီတွင် CNF ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်လှစ်ရေး ပခုက္ကူ ချင်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကြိုဆို
တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ 12 ရက် 2012 ခုနှစ် ခိုနူမ်းထုန် သတင်း - ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန
လက်ရှိ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ နှင့် ချင်းအမျိုသားတပ်ဦးအကြား ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းမှူ ဖော်ဆောင်ရေးပဏာမ သဘောတူ ညီချက်အရ ချင်းပြည်နယ် ဒုတိယမြို့တော် မတူပီမြို့တွင် ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်လှစ်ရေးကို ပခုက္ကူ တက္ကသိုလ်မှ ချင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း သိရသည်။
“စီအဲန်အက်ဖ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လာနိုင်ယင် ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကြိုဆိုဖို့ စီစဉ်နေ တယ်၊ မတူပီ မကဘူး၊ မင်းတပ်၊ ကန်ပက်လက်အထိ လာရောက်နိုင်ယင် အကောင်းဆုံးပေါ့” ဟု ပခုက္ကူ တက္ကသိုလ် ချင်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှူ ကော်မီတီ၊ ပခုက္ကူ မြို့ မတူပီချင်း လူမှူရေး အသင်း မှ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ တဦးကပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး အစိုးရလူကြီးတွေ လာယင်တောင် ဖြူစိမ်း ၀တ်စုံနဲ့ ကြိုဆိုခိုင်းတာပဲ၊ ကိုယ့် အမျိုးသားရေး အတွက် သွေး သောက်တွေလာမှတော မတူပီ၊ မင်းတပ်၊ ကန်ပက်လက်မှ ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ လွမး်ခြုံပြီး ကြိုဆိုဖို့ စီစဉ်နေ ကြောင်း ဆက်ဆိုသည်။
ဇန်နဝါရီ ၅-၆ ရက်နေ့က ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှင့် ချင်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်အပါအဝင် ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် စီအဲန်အက်ဖ် အကြား ပဏာမ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်အရ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ထန်တလန်၊ တီးတိန်၊ မတူပီမြို့များတွင် စီအဲန်အက်ဖ် ဆက်ဆံရေးရုံး ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တီးတိန်ဒေသခံများက တီးတိန်မြို့တွင် ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်လှစ်ရေးကို ကန့်ကွက်ထားသည်။
“တီးတိန်မြို့မှာ CNF ရုံးဖွင့်မှာကို တီးတိန် လူထုက ကန့်ကွက်တာကြားတယ်၊ ပခုက္ကူ ချင်းကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး၊ အခုလို အချိန်အခါမှာ ကျတော်တို့ ချင်းတွေ ပိုပို စည်းလုံးမှု လိုအပ်နေ ချိန်မှာ ကန့် ကွက်မှုရှိလာတာကို ကြားသိတော့ အလွန်ဘဲ ၀မ်းနည်းတယ် ” ဟု ပခုက္ကူ ရှိ ချင်းကျောင်းသားတဦးက ပြောသည်၊
ယင်းကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်ပြီး တီးတိန်ဒေသခံများနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ စီအဲန်အက်ဖ် အဓိပတိကောင်စီမှ စီစဉ်နေသည် ဟု ကြားသိ ရသည်။
ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် ခ စ ယ ခေါင်းဆောင် တဦး၏ တရားဝင်ပြောကြားချက်အရ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်တွင် ချင်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ သူ ၄၁၉ ဦးရှိကြောငး် သိရသည်။
လာမည့် ဧပြီလတွင် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် စီအဲန်အက်ဖ် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များ ပြန်လည်တွေ့ ဆုံဘွယ်ရှိသည်။
နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်ထဲတွင် စီအဲန်အက်ဖ်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင် ရန် ဟု ပါရှိ သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး က ချင်းပြည်နယ်အတွက် တကယ့်လိုအပ်ချက်ပါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်မြဲစေ ချင်တယ် ” ဟု ဆက်ပြောသည်။
CNF ဆက္ဆံေရးရုံး ဖြင့္လွစ္ေရး တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ CNP ၾကိဳဆုိ
တနဂၤေႏြေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 19 ရက္ 2012 ခုႏွစ္ ခုိႏူမ္းထုန္
ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္း တီးတိန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စီအဲန္အက္ဖ္ မွ ဆက္ဆံေရး ရုံးဖြင့္ လွစ္မည့္ အေပၚ တီးတိန္ ၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ပါတီေကာ္မီတီ က ၾကိဳ ဆုိေထာက္ခံ သည္ဟု သတင္း ရရွိ သည္။
စီအဲန္ပီ ဥကၠဌ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပူး ဇုိဇမ္းဦးေဆာင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁ ႏွင့္ ၃ အရ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ မွ စီအဲန္ပီ ျပည္သူ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ စီအဲန္ပီ ပါတီ၀င္အားလုံးက ၾကိဳဆုိေထာက္ခံေၾကာင္း စာအမွတ္ ၁/၂၀၁၂ (ရက္စြဲ ၊ ဇႏၷဝါရီ ၃၁ /၂၀၁၂) အရ သေဘာ ထားထုတ္ျပန္ထားသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠဌ ဦး ကမ္ဇဒါးလ္ က “ တခ်ဳိ႕ ပုဂၢဳိလ္ ေတြက ဒီ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကန္႕ကြက္တာရွိတယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕ အေနနဲ႕က ဒီအခ်ိန္မွာ “ခ်င္း” လူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း ကန္႕ကြက္ တာမ်ဳိး မလုိခ်င္ဘူး၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ဆုံးရွဴံးနစ္နာမႈေတြ ရွိႏုိင္တာပဲ၊ အဲဒါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အားလုံး ၾကဳံခဲ့ၾကတဲ့ ဥစၥာပါ” ဟု ေျပာသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ယခုလုိ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ အနာေဟာင္းေတြ ျပန္ဆြေနမည့္အစား လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေတြကုိ ရွာၾကဖုိ႕အခ်ိန္တန္ပါၿပီလုိ႕ ခံယူေၾကာင္း ဆက္ဆုိသည္။
ဇႏၷ၀ါရီလ ၅- ၆ ရက္ ခ်င္းျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စီအဲန္အက္ဖ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္အရ တီးတိန္၊ ထန္တလန္၊ မတူပီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ မည့္အေပၚ ထန္တလန္ ႏွင့္ မတူပီ ေဒသခံမ်ား အား ေပးေထာက္ခံေၾကာင္းသိရသည္။
“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီအဲန္အက္ဖ္နဲ႕ အစုိးရတုိ႕ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အေရးၾကီးပါ တယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕က စီအဲန္အက္ဖ္ ဘယ္ေတာ့ ရုံးလာဖြင့္မလဲဆုိတာပဲ ေစာင့္ေနၾကတာ၊ ငါတုိ႕ သားသမီးေတြ မ်က္ႏွာျမင္ ခ်င္တာလည္း ပါတာ ေပါ့ ” ဟု မတူပီ ၿမိဳ႕ေပၚမွ လူၾကီးတဦးက ေျပာသည္။
CNF က ချင်းပြည်နယ်အတွင်း တပ်စခန်းနေရာချရေး စတင်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 08 ရက် 2012 ခုနှစ် ခိုနူမ်းထုန် သတင်း - ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန
ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့က ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်အရ ချင်းအမျိုး သားတပ်ဦး (CNF)က ၄င်းတို့၏ တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များကို ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စခန်းချပြောင်းရွှေ့ရန် ပြင်ဆင် နေပြီဟုသိရသည်။
ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်မှ ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဟရန်းသင်ထိုက် နဲ့ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူး သန်းထွန်းတို့ ဦးဆောင်သော CNA တပ်ဖွဲ့တချို့သည် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝ နဲ့ ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်း စခန်းချရန် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ကနေ ထွက်ခွါသွားကြ သည်ဟု CNF တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူး(၁) ပူးပေါလ်စီထာက ယခုလိုပြောပြ သည်။
“ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ပြောတုန်းက တီးတိန်၊ထန်တလန်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်အသီးသီးမှ ကျေးရွာအုပ်စု ၂ နေရာ တွင် နေရာချထားဘို့ သဘောတူထားတယ်၊ အဲဒီသူတို့ပေးတဲ့နေရာ၊ ညွန်းတဲ့နေရာမှာ စခန်းသွားချ ဖို့ သူတို့သွားတာ ဖြစ်တယ်”
မြန်မာအစိုးရကို ၂၃ နှစ်ကြာ လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့ CNF သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့က အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူလက် မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပြီး ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်၊ ထန်တလန် နဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ် တို့တွင် တပ်စခန်းချရန် နဲ့ ဆက်သွယ် ရေးရုံးထားရှိရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။
CNA တပ်ဖွဲ့သည် ယခင်က မြောက်ပိုင်းတိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်း၊တောင်ပိုင်းတိုင်း နှင့် အနောက် တောင်တိုင်း ဖြင့် ခွဲထားပြီး အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် အခြေစိုက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ဇန်နဝါရီ ၁၈ မှ ၂၁ အထိ ကျင်းပသော စီအဲန်အေ တပ်မှူးများအစည်းအဝေးတွင် တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ကို ဗျူဟာ ၁၊ ၂၊ ၃ ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
“ ကျတော်တို့ သုံးနေရာကို တပြိုင်တည်း နေရာချထားဖို့က သွားရေးလာရေး၊ ရိက္ခ စုဆောင်းရေး အခက် အခဲတွေ ရှိနေ သေး လို့ အနီးစပ်ဆုံးနေရာတွေကို အရင်ဦးစားပေးရွေ့နေရတာဖြစ်တယ် ” ဟု စစ်ရုံးချုပ်မှ တာဝန်ရှိ တဦးက ပြောသည်။
CNA တပ်စခန်းကို ပလက်ဝမြို့နယ် ကုန်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပထိန်တလန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပါရာကျေးရွာ အုပ်စု ၊ ထန်တ လန်မြို့နယ် တလန်ပီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇန်တလန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တီးတိန်မြို့နယ် ဇိမ်ပီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘုတ်ဖိရ်ကျေးရွာအုပ်စုတို့တွင် ထားရှိမည်ဟုသိရသည်။
ထန်တလန် နဲ့ ပလက်ဝ မြို့နယ်တွင် CNA တပ်စခန်းချမည့်ကိစ္စကို ဒေသခံလူထုမှ ကန့်ကွက်မှုများ မရှိသော် လည်း တီးတိန်မြို့နယ်မှာမူ ဒေသခံများက ကန့်ကွက်မှုများရှိနေသည်။
တီးတိန်တွင် CNF ဆက်သွယ်ရေးရုံးထားရှိမည့်ကိစ္စ ကန့်ကွက်မည်
သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 03 ရက် 2012 ခုနှစ် ခိုနူမ်းထုန်
သတင်း - ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (စီအဲန်အက်ဖ်) နှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့၏ သဘောတူညီချက် (၉) ချက် အနက် (၂) ချက် မြောက်ဖြစ်သော တီးတိန်မြို့နယ်တွင် CNF ဆက်သွယ်ရေးရုံးထားရှိရန် ဆိုသည့် ကိစ္စကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဇိုမီးအမျိုးသား များက ကန့်ကွက်ကြမည်ဟု ဇန္နဝါရီလ နောက်ဆုံးပတ်က ပြောလိုက်သည်။
CNF နှင့် အစိုးရတို့သည် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က အချက် (၉)ချက်ပါသော သဘောတူညီစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ယင်း စာချုပ်ထဲတွင် CNF ၏ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို တီးတိန်၊ ထန်တလန် နှင့် ပလက်ဝ မြို့နယ်တွင် ထားရှိရန်ဟု ပါရှိသည်။
တီးတိန်မြို့နယ်တွင် CNF ဆက်သွယ်ရေးရုံးထားရှိမည့်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် တီးတိန်မြို့ရှိ လူငယ်ခေါင်းဆောင် တချို့က ပြည်သူလူထု၏ လက်မှတ်များကို ကောက်ခံနေသည်ဟု တီးတိန် လူငယ် ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောသည်။
“ CNF ကို လူတော့မုန်းတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေပေါ့၊ အရင်တုန်းကဆိုရင် CNF က ဒီဘက်မှာ သောင်းကျန်း တာများလို့ ပေါ့၊ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေဘာတွေဖွင့်လို့ရှိရင် အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်တုန်းကလည်း ဒုက္ခရောက်ကျတယ်၊ အခု အတွင်းမှာ ရှိမယ် ဆိုရင် ပိုပြီးဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုပြီး ပြည်သူလူထုက လည်းယူဆ လို့” ဟု သူကပြောသည်။
လက်မှတ်ကောက်ခံမှုကို တီးတိန်မြို့အပြင် ဇိုမီးအမျိုးသားများနေထိုင်သော တွန်းဇံ၊ ကလေးမြို့ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ တို့တွင် လည်း လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုသိရသည်။
ထို့အပြင် ပြည်ပရှိ ဇိုမီးအမျိူးသားများကလည်း ကန့်ကွက်လက်မှတ်ရေးထိုးကြမည်ဟု သိရပြီး အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ် ၌ ကန့်ကွက်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မည့် စာမျက်နှာတခုပြုလုပ်ထားသည်ဟု Zogam Post အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်ဖော် ပြထားသည်။
ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိသည့် တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်း အုပ်စု ၃၀ ကျော်တွင် လက်မှတ်များကို ကောက်ခံပြီးပြီဟု သိရပြီး ယခုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ချင်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဟုန်းဟိုင်းထံသို့ တင်ပြ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး CNF လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်(၁) ပူးပေါလ်စီထာက “ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် လို့ Voice of Zomi ကနေ ရေးသားထုတ်လွှင့်တာကိုဖတ်တဲ့အပြင် အခြားသိရှိ ရတာမရှိဘူး၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန် ရေးကြောင့် ပြည်သူအများ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့တာ အမှန်ပါပဲ၊ CNF လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ စစ်အစိုး ရက နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချတာတွေ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ တွေနဲ့ သတ်ပစ်ခဲ့တာတွေလည်း ချင်းပြည်အနှံ့မှာ ရှိခဲ့တယ်။ ချင်းပြည်အတွင်း သတင်းစာ၊ တယ်လီဖုန်းစတဲ့ မီဒီယာသုံးတွေမရှိတော့ တနယ်မှာဖြစ်ပျက်တာကို အခြားတနယ်က မသိနိုင်တဲ့အခါမှာ ၄င်းတို့သက်ဆိုင်ရာ ဒေသမှာ ဖြစ်ပျက်တာကို ကွက်ပြီး ထင်ကြမြင်ကြတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်အား လုံးကို ချင်းပြည်တပြည် လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး “ ကျနော်တို့က ၁၉၉၀ခုနှစ်လောက်စပြီး ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်တိုင်းဆီမှာ အလှူငွေ ကောက် ခံခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်အထိပေါ့။ ဒါလဲ ချင်းပြည်တပြည်လုံးမှာကောက်ခံတာပါ။ တချို့မြို့နယ်ကို ချန်လှပ်ထားပြီး ကောက်ခံမှုတွေ မလုပ်ဖူးပါဘူး။ တီးတိန် နဲ့ တွန်းဇံမြို့နယ်ဒေသခံ တွေက အခုလိုမျိုး ကန့်ကွက်မှုကို တခါတည်း မလုပ်ပဲနဲ့ အမျိုးသားအကျိုးကို ငဲ့ညှာပြီး အချင်းချင်း ကြား မကျေနပ်ခဲ့တာတွေ နားလည်မှုလွဲခဲ့တာတွေကို ခေါင်းချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ကို အလေး ပေးစေချင်တယ်။ ဒီလိုလုပ်သွား ကြရင် ကျနော်တို့ အချင်းချင်းကြားမှာ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ အရာ ရှိမယ် မထင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ဇန္နဝါရီလ ၅- ၆ ရက်နေ့ ပြည်နယ်အဆင့် ပမာဏ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်ထဲတွင် ချင်း ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ဘိန်းခင်း၊ ဘိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ဘိန်းကုန်ကူးခြင်းများကို အမြစ်ပြုတ်ခြေ မှုန်းရေး ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်သွားမည်ဟု ပါရှိသည်။
CNF နှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပြီ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 05 ရက် 2012 ခုနှစ် ခိုနူမ်းထုန်
ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး CNF နှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်း ၁၀ နာရီက ပြည်နယ်မြို့တော် ဟားခါးမြို့ အစိုးရဧည့်ဂေဟာ ဆောက်လုပ်ရေး ရိပ်သာမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စတင်ဆွေး နွေးနေကြပြီဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် CNF ဘက်က ဒေါက်တာရွှေခါး၊ ပူးရားလ်နှင်း၊ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းအင်ဒရူး ငွန်ကျုံးလျန်၊ ပူးဆော လမွန်၊ ဆလိုင်းပီတာလျန်၊ ကိုလှထွန်း၊ ကိုထက်နီ၊ ပူးရိုခေါမာ၊ ကိုခင်မောင်လေးနှင့် ပူးငိုင်ကြာထန်း တို့ပါ၀င်ပြီး၊ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဘက်မှ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြံုရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းဦး၊ ပြည်နယ် အစိုးရ အတွင်းရေး မှူး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချူပ် နှင့် ဗျူဟာမှူးတို့ပါ၀င်ကြောင်းသိရသည်။
ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မသိရှိနိုင်သေးသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလား အလာကောင်းမည် ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် သစ်တောဝန်ကြီး ဦးကျော်ငြိမ်းကပြောသည်။
“ အခြေအနေက မသိသေးဘူး ဆွေးနွေးတာ မပြီးသေးလို့ ပြန်မလာကြသေးဘူး၊ အလားအလားတော့ ကောင်းမယ် လို့ကျနော်မှန်းထားပါတယ်” ဟု သူကပြောသည်။
ပြည်နယ်အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို မနက်ဖြန်တွင် အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပြီး ဟားခါးမြို့မိမြို့ဖများ နှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက CNF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နဲ့ ပြည်နယ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့ကို ညစာစားပွဲ တည်ခင်းဧည့်ခံပြီး ဆုတောင်းပွဲတရပ်ပြုလုပ်သွားမည်ဟုလည်းသိရပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါ၀င်သော ချင်းအမျိူးသားပါတီ (CNP) က ယခုလို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံကြ သည့်အပေါ် ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြိုးစားဖို့လိုကြောင်း ပါတီဥက္ကဌ ဦးဇိုးဇမ်ကပြောပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ကတော့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ နေ့ချင်းည ချင်းတော့ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံတော့ ချက်ချင်းတော့ဝင်ချင်မှဝင်မှာလေ၊ ဒါပေမဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် နဲ့ပဲ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ကျနော်တို့ကြိုးစားမှပဲဖြစ်မယ်’’ ဟုသူကပြောသည်။
CNF အဖွဲ့နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့သည် ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက် ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသော်လည်း တစုံတရာသဘောတူညီ ချက်မရရှိခဲ့ကြပေ။
ယခုတကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာမူ CNF နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးနိုင်ရန် ၉၅ ရာခိုင်နှှုန်းခန့် သေချာ နိုင်သည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်သည့် ပြည်တွင်းဂျာနယ် The Voice အင်တာနက် စာမျက်နှာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထာဝရ တည်တ့ံသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ရေး အထူး ဆုတောင်း ပေးကြရန် ချင်းပြည်သူထံ CNF ပန်ကြား
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အနှစ် ၆၀ ကျော်ဖြစ်ပွားသည့် ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသတ်ပြီး ထာဝရ တည်တ့ံသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးက ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ချင်းပြည်သူ အားလုံးထံ မိမိတို့ ကိုးကွယ်သည့် ဘာ သာအလိုက် အထူး ဆုတောင်းပေးကြရန် မနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ပန်ကြားထားသည်။
“ ကျတော်က အသင်းတော်အနေနဲ့ မဟုတ်ပေမဲ့ နှစ်ဖက် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ညတိုင်း ဆုတောင်း ပါတယ်” ဟု ပြည် တွင်း အခြေစိုက် Gospel Baptist Church pastor တဦးက ပြောသည်။
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ( CNF ) ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ချင်းပြည်နယ် အစိုးရငြိမ်း ချမ်းရေးကိုယ် စားလှယ် တို့သည် လာမည့် ဇန္နဝါရီလ ၅ – ၆ ရက်နေ့တွင်း မြို့တော်ဟားခါး၌ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပဏာမ တွေ့ဆု ံကြမည်ဖြစ်သည်။
ပန်ကြားလွှာတွင် အထူးဆုတောင်းမည့် နေ့ရက်အချိန်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှ ရ ရက်အကြား တပတ် တိတိဖြစ်မည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံမည့် သတင်းသိသိချင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များသည် အစုလိုက် ဆုတောင်းနေကြပြီဟုလည်း ပြောကြ သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ဘုရားကြိုက်တဲ့အလုပ်ပါ၊ ရန်ကို ရန်ချင်းမတုံ့နှင်းပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နဲ့ အချင်းချင်း ကမ်းလင့် နိုင်ကြစေကြောင်း ဆန္ဒပြုပါတယ်” ဟု မီဇိုရမ်အခြေစိုက် ချင်း ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် တဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရှိ မီဇိုလူမျိုး ခရစ်ယာန် အသင်းတော်သို့လည်း အထူး ဆုတောင်းပေးကြရန် တဆက်တည်းပန်ကြားထားကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရွှေခါးမှ ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ကို နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းဦးက ဦးဆောင်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။
စီအဲန်အက်ဖ်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လ အတွင်း နအဖ အစိုးရနှင့် တွေ့ ဆုံစဉ်တွင်လည်း ချင်းပြည်သူ အားလုံးထံ မိမိတို့ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာအလိုက် ဆုတောင်းပေးကြရန် မေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့သည်။
CNF နဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ တွေ့ဆုံမည့်အပေါ် CNP ကြိုဆို
အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ 06 ရက် 2011 ခုနှစ် ခိုနူမ်းထုန် သတင်း
လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလအတွင်း ချင်း အမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ လက်ရှိ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရ တွေ့ဆုံမည့်အပေါ် ချင်းအ မျိုးသားပါတီ က ထောက်ခံကြိုဆိုသည်ဟု သိရသည်။
ယခုလ ၃ ရက်နေ့မှ ၄ ရက်နေ့အထိ နှစ်ရက်တာ ကျင်းပသည် ချင်းအမျိုးသားပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင် ကော်မီတီ အစည်းအဝေးက ယခုကဲ့သို့ ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။
CNF နှင့် မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပြီးခဲ့သည့် နို၀င်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာတွင် တခြားသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်သည့် KNPP, KNU၊ SSA (S) တို့နှင့်အတူ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးလာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ပထမပတ်တွင် ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဟားခါးတွင် ပဏာမအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် သဘော တူညီခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသဘောတူညီချက်ကြောင့် နှစ်ဖက် ပြန်လည်တွေ့ဆုံမည့်အပေါ် ချင်းလူကြီးတချို့လည်းထောက်ခံ ကြိုဆိုသည်ဟု ထပ်မံ သိရသည်။
“ ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားအတွက် နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းပြီး ပြေလည်နိုင်ပါစေလို့ ပဲ ပြောချင်တယ်” ဟု ဟားခါးမြို့မှ လူကြီး တဦးက ပြောသည်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီအစည်းအဝေးသို့ ပါတီဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ လွှတ်တော်အမတ် များ နှင့် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီ ၀င်များ စုစုပေါင်း ၃၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် CNP အနေဖြင့် လာမည့် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ် တပြည်နယ်လုံး၌ အနိုင်ရရှိနိုင်ရန် မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ရေးကိစ္စကို အလေးထားဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်ဟု ချင်းအမျိူး သားပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဆလိုင်းကျဲအိုဘိခ်ထောင်း ကပြော သည်။
‘‘ ရပ်၊ကျေး အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ရွေးခန့်အပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ နည်းဥပဒေလည်း ထွက်နေပြီ၊ သမ္မတက လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးရင်တော့ အဲဒီဟာ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်မှာကိုး၊ အဲဒီမှာ ချင်းအမျိုးသားပါတီအနေနဲ့ ချင်းပြည်နယ် တပြည်နယ်လုံးမှာအနိုင်ရရှိဖို့ မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်ပြီး အဓိကလုပ်ဆောင် သွားမှာပါ’’ ဟု ဆလိုင်းကျဲအိုဘိခ်ထောင်းက ပြောသည်။
ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်)ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို အထက်၊ အောက် လွှတ်တော် ၂ ရပ်စလုံး က ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့က အတည်ပြု လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့သာ ကျန်တော့သည်ဟုသိရသည်။
လက်ရှိ ချင်းပြည်နယ်၏ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်ချူပ်ရေးမှူး အများစုသည် အနိုင်ရ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင် များဖြစ်ကြပြီး ချင်းပြည်သူ လူထုများကလည်း မနှစ်သက်ကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရပ်၊ကျေးအုပ်ချူပ်ရေး မှူး ရွေးကောက်ပွဲကို အစိုးရအနေဖြင့် အမြန် ဆုံး ကျင်းပပေးစေခြင်ကြောင်းဆလိုင်းကျဲအိုဘိခ်ထောင်း ကပြောသည်။
နှစ်ရက်တာ ကျင်းပသော အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်း တွန်းဇံ နှင့် ကျီခါးဒေသရှိ ဘိန်းစိုက် ခင်းကိစ္စ၊ ချင်းပြည်သူများ တခြားဒေသ သို့ ပြောင်းရွှေ့နေကြသည့်ကိစ္စ နှင့် ချင်းပြည်နယ်၏ ဆင်းရဲမွဲတေ မှုလျော့ကျ ရေး စသည့်အကြောင်းအရာများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်ဟု သိရသည်။
ချင်းအမျိူးသားပါတီ (CNP) သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းလူမျိူးကို ကိုယ်စားပြုသော ပါတီတခုအနေ ဖြင့် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီ အမတ် (၉) နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး သဘောတူညီချက်ရ
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ ဒေါက်တာ ရွှေခါး ဦးဆောင်တဲ့ CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးတို့ဟာ ဒီကနေ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အချက် (၁၆) ကို သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်တွင် တွေ့ဆုံစဉ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာမှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ နှစ်ဘက် သဘောတူညီချက်တွေအရ CNF နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ အားလုံးနီးပါး ပြေလည်မှု ရရှိသွားပြီလို့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင် ပြည်ထောင်စု သစ်တောဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
" ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးနှစ်ဘက် သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါပြီ။ ပထမအချက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ယခင်တုန်းကဟာတွေကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ပြန်ပြီးတော့ သဘောတူပါတယ် ဆိုတာကို ပြန်ပြောတယ်ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ ယာယီအခြေပြု နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ပေါ့။ အဲတာကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Hard case ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်က တပ်မတော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ လုံခြံုရေးနဲ့ နယ်စပ်ဝန်ကြီးနဲ့ နောက်တဘက်က ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ တပ်မတော်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်က ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်က သူတို့ကို မူပေးပြီးတော့ နယ်မြေခွဲတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးစေပါတယ်။ အဲတာတွေ အားလုံးလည်း ကျွန်တော်တို့ သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပါတယ်"
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြား ပထမအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို အခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၆) ရက်နေ့က ဟားခါးမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အချက် (၉) ချက်ပါ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲက သဘောတူညီချက််တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ချင်းပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကို တာဝန်ယူထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ သစ်တောရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
CNF ငြိမ်းအဖွဲ့ ချင်းပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်အရ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ သူတို့ ဆက်ဆံရေးရုံး ထားရှိမယ့် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မတူပီမြို့ ဘုံတလာ ခန်းမဆောင်မှာ ဒေသခံလူထု သုံးထောင်လောက်နဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး CNF တပ်သားများကို CNF တပ်စခန်းတစ်ခုတွင် တွေ့ရစဉ်။
အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ CNF ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာရွှေခါးက တက်ရောက်လာကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
" အစိုးရသစ် တက်လာပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံရေးကိစ္စကို ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆွေးနွေးရအောင် ဆိုတဲ့ဟာကို သူတို့ဘက်ကည်း လက်ခံတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တော်တော်များများ လူတွေကပြောကြတယ်။ အခုအစိုးရသစ်က အရင်တုန်းက အစိုးရခေတ်က လူတွေပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ အခုမှ သူတို့ဒီလို ပြောင်းလဲလာသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကော ယုံကြည်နိုင်စရာ ရှိသလား ဆိုတဲ့ဟာက တော်တော်များများ မေးကြတယ်။ တခါတလေကျလို့ရှိရင် သံသယစိတ်က နှစ်ဦးနှစ်ဘက်မှာ ရှိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တော့ ဒီသံသယတွေကို ခဏလေး ထားဦး။ အချင်းချင်း စကားပြောကြမယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ဟုတ်ပြီ ဒါဆို စကားပြောတာပေါ့ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်"
ဒီလိုအစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်း ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေး ဆိုတဲ့ အချက် (၃) ချက်ကို ကိုင်စွဲပြီး ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါက်တာရွှေခါးက ပြည်သူလူထုကို ပြောဆိုပါတယ်။
မတူပီမြို့နယ်ဟာ CNF ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ထားရှိမယ့် မြို့နယ် (၃) ခုထဲက တစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် (၁၇) ဦးတို့ဟာ မေလ (၇) ရက် နဲ့ (၈) ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေး
February 8th, 2012 | AddaComment | 306 views
ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့က ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်အရ ချင်းအမျိုး သားတပ်ဦး (CNF)က ၄င်းတို့၏ တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များကို ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စခန်းချပြောင်းရွှေ့ရန် ပြင်ဆင် နေပြီဟုသိရသည်။
BNI ႏွင့္ ဦးခိုင္ေကာင္းစံ (ALP ပါတီ၀င္ေဟာင္း)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေျမာက္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္။
CNF က ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် (၉)ချက်ပါ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှု အပေါ်ရှင်းလင်း
January 20th, 2012 | AddaComment | 107 views
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (စီအဲန်အက်ဖ်) က ယခုလ ဇန္နဝါရီလ ၅ – ၆ အတွင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် (၉) ချက်ပါ ပဏာမ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်အပေါ် ယနေ့ ရှင်းလင်းချက်ပြုလုပ်လိုက်သည်။
မြန်မာအစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြည်ထောင်စုတခုလုံးတွင် ရေရှည်တည်တ့ံခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်း ရေးဖော် ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် လမ်းစပွင့်လာသည်ဟု စီအဲန်အက်ဖ်က ယူဆကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြထားသည်။
တဆက်တည်း စီအဲန်အက်ဖ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ အကြား (၉) ချက်ပါ ပဏာမ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော တူညီမှု မရရှိမှီ နှင့် ရရှိပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ အရပ်ရပ်ပြောင်းလဲ
သွားသည်ကို အထူးနား လည်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ယင်းအနေအထားများကို ချင်းအမျိုးသားများ၏ အကျိုး စီးပွားအောင်မြင်နိုင်ရေး နှင့် တန်းတူညီ မျှှမှုကို အခြေခံသည့် ရေရှည် တည်တ့ံသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အကျိုးရှိ
ရှိ အသုံးချနိုင်ရေး သည် အထူး အရေးကြီးကြောင်း တိုက်တွန်း ထား သည်။
သဘောတူညီချက် (၉) ချက်အနက် (၄) ချက်ပါ သဘောတူညီချက်သည်အရေးကြီး ဆုံးအချ
က်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အခြေခံမူများ ထားရှိရန်လိုအပ် ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအချက်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးဟာ ပြည်နယ်အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမှ တပြည်လုံးအသွင် ဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်ဖြည့် စွက်မှုပြု လုပ်သည့် အခါ ဒို့တာဝန်အရေး သုံးပါးအပြင် ပြည်ထောင်စုအရေး ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတို့ကို အခြေခံပြီး ပြည်ထောင်စုအ ဆင့်ဆွေး နွေးခြင်းအား တဆင့်ပြီးတဆင့်ပြုလုပ်ရန် သဘောတူခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှင်းလင်းထားသည်။
ယခု သဘောတူညီမှုသည် အလင်းဝင်ခြင်း၊ လက်နက်ချ အည့ံခံခြင်း၊ အရှူံးပေးလက်မြောက်ခြင်း မဟုတ်သည့် အပြင် တန်းတူညီမျှှမှုကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးနှ
င့် ရေရှည်တည်တ့ံ ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက်နိုင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်။
ယနေ့အထိ အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
အစည်းများဖြစ်သည့် CNF အပါအဝင် United Wa State Army (UWSA), Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), Natioanal Democratic Alliance Army (NDAA), Restoration Council of the Shan State (RCSS/SSA), Karen National Union (KNU) စသည့်အဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှု ရရှိြပီးဖြစ်သည်။
001-a_handshake ယခုလဆန်းပိုင်းက ချင်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့်ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သဘောတူချက်၌ CNF အတွက် နယ်ြမေဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသတ်မှတ်ချက်အပါအဝင် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏တောင်းဆိုချက်ထက် ၅ ချက် ပိုြကောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်ပါသည်။ “သဘောတူညီချက် ၉ ချက်ထဲက ဒုတိယအချက်မှာ CNF လှုပ်ရှားဖို့နယ်ြမေသတ်မှတ်ချက်ပါတာကိုတွေ့ရတယ်။ နှစ်ဖက် ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ထန်တလန်းမြို့မှာဖွင့်မယ်။ တီးတိန်နဲ့မတူပီမှာဆက်လက် ဖွင့်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားကြ မယ်။ CNF အနေနဲ့ ထန်တလန်းမြို့နယ်ထဲက ၃ အုပ်စုမှာ အြခေချဖို့ သဘောတူတယ်- စတာတွကေိုတွေ့ရတယ်။ တခြားအဖွဲ့အစည်း တွထေက်စာရင် သူတို့တွရေတဲ့သဘော တူညီချက်က ထူးခြားတယ် ” ဟု သျှမ်းပြည်အရေးလေ့ လာသည့် သျှမ်းတပ် အရာရှိဟောင်း တဦးကြပောသည်။ ယခုလ ၅ ရက်နေ့က ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရဖက်မှ (အ ပစ်ရပ်ရေး၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်လှစ်ရေး၊ အခြား တဘက်နယ်ြမေဖြတ်သန်းရာတွင်လက်နက်မကိုင်ဆောင်ရေး၊ ထပ်မံ တွေ့ဆုံရင် အချိန်နေရာသတ်မှတ်ရေး) ပါ အချက် ၄ ချက်အပြင် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှတင်ပြသော အချက် ၅ ချက် စုစုပေါင်း ၉ ချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြြကောင်း ချင်းလဲန်း ဂါးဒီယဲန်း၌ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှ တောင်းဆိုသည့် အချက် ၅ ချက်အား ၁- ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးရန်အတွက် CNF/ CNA နှင့်ပြည်သူလူထုလွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ြကောင်း၊ ၂- ဒေသခံလူထု စားဝတ်နေရေးပြဿနာ ကူညြီဖေရှင်း ပေး နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာNGO အဖွဲ့များအား ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအြခေချခွင့်ပြေးကောင်း၊ ၃- အစိုးရထံမှာ အထောက် အပံ့ယူ၍ CNF လှုပ်ရှားသည့်နယ်ြမေအတွင်း စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ခွင့်ကိုလည်း သဘောတူညီ ြကောင်း၊ ၄- ချင်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ အစိုးရ နှင့် CNF တို့ လက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ြကောင်း၊ ၅- မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ဆေးစွဲနေခြင်းတို့ကို ၂ ဦး၂ ဖက် လက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ် ြကောင်း အစိုးရကိုယ်စားလှယ်က သဘောတူြကောင်း သိရသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် CNF တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပထမဆုံး ပဏာမ အဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပြီး CNF ဘက်မှ ဒေါက်တာရွှခေါး၊ ပူးရားလ်နှင်း၊ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းအင်ဒရူး ငွန်ကျုံးလျန်၊ ပူးဆော လမွန်၊ ဆလိုင်းပီတာလျန်၊ ကိုလှထွန်း၊ ကိုထက်နီ၊ ပူးရိုခေါမာ၊ ကိုခင်မောင်လေးနှင့် ပူးငိုင်ကြာထန်း တို့ပါ၀င်ပြီး၊ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဘက်မှ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံ ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းဦး၊ ပြည်နယ် အစိုးရ အတွင်းရေး မှူး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချူပ် နှင့် ဗျူဟာမှူးတို့ ပါ၀င်ြကောင်း ခေါန်နူမ်ထုန်သတင်းဌာနကလည်းဖော်ပြထားသည်။ အစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့အနက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆက်လက် ဆွေးနွေး ဆဲအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ ( UျွှSA / NDAA ) ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးရန်ပြင်ဆင်နေသော ၃ ဖွဲ့( ြျCSS /DKBA ကလိုထူးဖော/CNF ) နှင့်ပဏာမဆွေးနွေးကြဆဲအဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ (KNU / NMSP/ SSPP/ KIA/ KNPP) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ြျCSS/SSA နှင့် သဘောတူညီချက်များကိုလေ့လာသိရှိလိုပါက - http://www.mongloi.org/burmese/news/85-2008-08-01-03-14-40/2775--rcss-.html
ယခုလဆန်းပိုင်းက ချင်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့်ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သဘောတူချက်၌ CNF အတွက် နယ်ြမေဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသတ်မှတ်ချက်အပါအဝင် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏တောင်းဆိုချက်ထက် ၅ ချက် ပိုြကောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်ပါသည်။
“သဘောတူညီချက် ၉ ချက်ထဲက ဒုတိယအချက်မှာ CNF လှုပ်ရှားဖို့နယ်ြမေသတ်မှတ်ချက်ပါတာကိုတွေ့ရတယ်။ နှစ်ဖက် ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ထန်တလန်းမြို့မှာဖွင့်မယ်။ တီးတိန်နဲ့မတူပီမှာဆက်လက် ဖွင့်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားကြ မယ်။ CNF အနေနဲ့ ထန်တလန်းမြို့နယ်ထဲက ၃ အုပ်စုမှာ အြခေချဖို့ သဘောတူတယ်- စတာတွကေိုတွေ့ရတယ်။ တခြားအဖွဲ့အစည်း တွထေက်စာရင် သူတို့တွရေတဲ့သဘော တူညီချက်က ထူးခြားတယ် ” ဟု သျှမ်းပြည်အရေးလေ့ လာသည့် သျှမ်းတပ် အရာရှိဟောင်း တဦးကြပောသည်။
ယခုလ ၅ ရက်နေ့က ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရဖက်မှ (အ ပစ်ရပ်ရေး၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်လှစ်ရေး၊ အခြား တဘက်နယ်ြမေဖြတ်သန်းရာတွင်လက်နက်မကိုင်ဆောင်ရေး၊ ထပ်မံ တွေ့ဆုံရင် အချိန်နေရာသတ်မှတ်ရေး) ပါ အချက် ၄ ချက်အပြင် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှတင်ပြသော အချက် ၅ ချက် စုစုပေါင်း ၉ ချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြြကောင်း ချင်းလဲန်း ဂါးဒီယဲန်း၌ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှ တောင်းဆိုသည့် အချက် ၅ ချက်အား ၁- ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးရန်အတွက် CNF/ CNA နှင့်ပြည်သူလူထုလွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ြကောင်း၊ ၂- ဒေသခံလူထု စားဝတ်နေရေးပြဿနာ ကူညြီဖေရှင်း ပေး နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာNGO အဖွဲ့များအား ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအြခေချခွင့်ပြေးကောင်း၊ ၃- အစိုးရထံမှာ အထောက် အပံ့ယူ၍ CNF လှုပ်ရှားသည့်နယ်ြမေအတွင်း စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ခွင့်ကိုလည်း သဘောတူညီ ြကောင်း၊ ၄- ချင်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ အစိုးရ နှင့် CNF တို့ လက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ြကောင်း၊ ၅- မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ဆေးစွဲနေခြင်းတို့ကို ၂ ဦး၂ ဖက် လက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ် ြကောင်း အစိုးရကိုယ်စားလှယ်က သဘောတူြကောင်း သိရသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် CNF တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပထမဆုံး ပဏာမ အဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပြီး CNF ဘက်မှ ဒေါက်တာရွှခေါး၊ ပူးရားလ်နှင်း၊ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းအင်ဒရူး ငွန်ကျုံးလျန်၊ ပူးဆော လမွန်၊ ဆလိုင်းပီတာလျန်၊ ကိုလှထွန်း၊ ကိုထက်နီ၊ ပူးရိုခေါမာ၊ ကိုခင်မောင်လေးနှင့် ပူးငိုင်ကြာထန်း တို့ပါ၀င်ပြီး၊ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဘက်မှ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံ ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းဦး၊ ပြည်နယ် အစိုးရ အတွင်းရေး မှူး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချူပ် နှင့် ဗျူဟာမှူးတို့ ပါ၀င်ြကောင်း ခေါန်နူမ်ထုန်သတင်းဌာနကလည်းဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့အနက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆက်လက် ဆွေးနွေး ဆဲအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ ( UျွှSA / NDAA ) ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးရန်ပြင်ဆင်နေသော ၃ ဖွဲ့( ြျCSS /DKBA ကလိုထူးဖော/CNF ) နှင့်ပဏာမဆွေးနွေးကြဆဲအဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ (KNU / NMSP/ SSPP/ KIA/ KNPP) တို့ဖြစ်ကြသည်။
RCSS/SSA နှင့် သဘောတူညီချက်များကိုလေ့လာသိရှိလိုပါက
CNF အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုး
ဖနိဒါ | သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၅၀ မိနစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ)။ ။ အစိုးရအား ၂၃ နှစ်ကြာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နှင့် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့ အပစ်အခတ် ရပ်ဆိုင်းရေး သဘောတူလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
နှစ်ရက်ကြာ ပြည်နယ်အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအပြီး သောကြာနေ့က ရေးထိုးလိုက်သည့် သဘောတူညီ ငါးချက်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလည်း ပါ၀င်ကြောင်း နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးရေး ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူများတွင် တဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည့် Shalom Foundation မှ ဆရာမ ဒေါ်ချင်းချင်းက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
“ဒီနေ့ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါပြီ။ CNF စစ်ဒေသ သတ်မှတ်တာတွေ တီးတိန်နဲ့ မတူပီမှာပဲ တပ်နယ်မြေသတ်မှတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်ညှိဖို့ရှိတယ်။ ဆက်ဆံရေးရုံးက တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းလို့ သတ်မှတ်တယ်”ဟု သူမ က ပြောသည်။
CNF ၏ ဆက်ဆံရေးရုံးကို ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းဟူ၍ မတူပီ၊ ထန်တလန်း၊ တီးတိန်မြို့နယ်များတွင် ဖွင့်လစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီး CNF တပ်လှုပ်ရှားနယ်မြေများလည်း သတ်မှတ်ပေး
ယခုကဲ့သို့ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး သဘောတူညီလိုက်သည့်အပေါ် ဆရာမ ချင်ချင်းက “ကျေနပ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အပစ်အခတ် ရပ်စဲချင်နေတာပါ”ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
နှစ်ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာရွှေခါး ဦးဆောင်သော CNF ကိုယ်စားလှယ် ၁၀ ဦးနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ သစ်တောဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း၊ ပြည်နယ်အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကော်မတီမှ ပြည်နယ် စပ်ဒေသလုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းဦး၊ စစ်ဗျူဟာမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကိုကိုကြီးတို့ အပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ် ခြောက်ဦး၊
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ငါးဦးတို့ ပါ၀င်သည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ရေး၊ နယ်မြေဖြတ်သန်းခွင့်ကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားရေး၊
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အပါအဝင် အချက် ၅ ချက်ကို သဘောတူညီမှု ရထားသည်ဟု သိရသည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ရှိနေခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာ
ကြောင့်ဖြစ်၍ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ချင်းပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘန်လျန်းက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
“နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဒီလို ဆွေးနွေးရမှာပေါ။ ကမ္ဘာ့စစ်မီးတောင်မှ နွေးဆွေးပြီးတော့ စာပွဲဝိုင်းနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးမှာ စစ်ပြေငြိမ်းတာလေ။ ဒီလိုမလုပ်ရင် တသက်လုံး ဒီလို တိုက်ကြခိုက်ကြတာ ဘယ်တော့မှ ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံရေးကြောင့် ဒီလိုလက်နက်ကိုင်တွေ ဖြစ်နေတာ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ စာပွဲဝိုင်းမှာဖြေရှင်းရတယ်။ ဒီလို ဆွေးနွေးတာ ကောင်းပါတယ်”ဟု သူက ပြောသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့တွင် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် CNF ဥက္ကဌ ပူးဇင်ကျုံးနှင့် ဒေါက်တာ ရွှေခါးတို့ ပထမအကြိမ် ပဏာမတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘောတူညီမှု ရသွားကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် မေလအတွင်းက တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် နှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနေရးအတွက် CNF ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ချင်းအမျိုးသား တပ်မတော် CNA ထူထောင်ကာ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင် အခြေစိုက် လှုပ်ရှားနေသည်။
၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်ဘက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် CNF ရဲဘော် အနည်းဆုံး ရ၀ ကျော် ကျဆုံးသွားသည်ဟု CNF နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစိုးရတပ်များနှင့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိတော့ပေ။
CNF မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံခဲ့သော အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလမှစတင်၍ တဖွဲ့ချင်း သီးခြားစီ လိုက်လံတွေ့ဆုံခဲ့ရာ CNF မှာ စတုတ္ထမြောက် အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး သဘောတူညီမှု ရသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
January 5th, 2012 | Comments Off | 819 views
“ အခြေအနေက မသိသေးဘူး ဆွေးနွေးတာ မပြီးသေးလို့ ပြန်မလာကြသေးဘူး၊ အလားအလားတော့ကောင်း မယ် လို့ကျနော်မှန်းထားပါတယ်” ဟု သူကပြောသည်။
ပြည်နယ်အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို မနက်ဖြန်တွင် အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပြီး ဟားခါးမြို့မိမြို့ဖများ နှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက CNF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နဲ့ ပြည်နယ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့ကို ညစာစားပွဲ တည်ခင်းဧည့်ခံပြီး ဆုတောင်းပွဲတရပ်ပြုလုပ်သွားမည်ဟုလည်းသိရပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ကတော့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ နေ့ချင်းည ချင်းတော့ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံတော့ ချက်ချင်းတော့ဝင်ချင်မှဝင်မယ်။
ချင်း​အမျိုး​သား​တပ်ဦး​နှင့်​ ပြည်နယ်အစိုး​ရ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဆွေး​နွေး​ပွဲ စတင်
ချင်း​ပြည်နယ်အစိုး​ရနဲ့​ ချင်း​အမျိုး​သား​တပ်ဦး​ (စီအန်အက်ဖ်)ရဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​တို့​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဆွေး​နွေး​ပွဲကို ချင်း​ပြည်နယ် ဟား​ခါး​မြို့​မှာ ဒီက​နေ့​စတင်တယ်လို့​ ဟား​ခါး​မြို့​နေ ​စောင့်​ကြည့်​အကဲခတ်တဦး​က ​ပြောပါတယ်။
ဒီ​ဆွေး​နွေး​ပွဲဟာ ဒီက​နေ့​နဲ့​ မနက်ဖြန် နှစ်ရက် ​ဆွေး​နွေး​မယ်လို့​ သိရြပီး​ ဘာ​တွေ ​ဆွေး​နွေး​တယ်ဆိုတာ​တော့​ အ​သေး​စိတ်မသိရ​သေး​ပါဘူး​။
အခုလ ၄ ရက်​နေ့​က ဟား​ခါး​မြို့​ကို​ရောက်ရှိလာကြတဲ့​ ချင်း​အမျိုး​သား​တပ်ဦး​ ကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​ကို ​ဒေသခံချင်း​ပြည်သူ ​ထောင်ချီပြီး​ ကြိုဆိုခဲ့​ကြပါတယ်။
၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုအြပီး​ တည်​ထောင်ပြီး​ စစ်အစိုး​ရကို လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့​တဲ့​ ချင်း​အမျိုး​သား​တပ်ဦး​ဟာ ညီညွတ်​သော တိုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​များ​ ဖက်ဒရယ်​ကောင်စီရဲ့​ အဖွဲ့​ဝင်လည်း​ဖြစ်ပြီး​ အမျိုး​သား​တန်း​တူ​ရေး​နဲ့​ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ်ဌာန်း​ခွင့်​အတွက် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်​နေတာဖြစ်ပါတယ်။
NUPA နှင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည်
ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသား ညီညႊတ္ေရးပါတီ (NUPA) ႏွင့္လည္း ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ထုတ္ အစုိးရ သတင္းစာ သတင္း တပုဒ္အရ သိရသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း စတုတၱေန႕ က်င္းပစဥ္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃) မွ ဦးဥာဏ္လင္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအတြက္ ယေန႕ကာလထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၊ ေတြ႕ဆံု ညွိႏိုင္းမူ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းစဥ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ရထားပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျဖၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး ပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆက္အသြယ္ ရရွိထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
UNFC တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (၁၁) ဖြဲ႕ ပါရွိရာ (၉) ဖြဲ႕ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသလို လက္မွတ္ေရးထုိးမူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း က်န္ရွိေနေသးေသာ UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕(၂) ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ NUPA အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးပါတီ (ရခိုင္ျပည္)ႏွင့္ LDU လားဟူး ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး အဖြဲ႕ (၂) ဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္တြင္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ ပါတီ (၃) ခုရွိရာတြင္ ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသား ညီညႊတ္ေရးပါတီလည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသား ညီညႊတ္ေရးပါတီသည္ အိႏၵိယတြင္ က်ဆံုးသြားေသာ ရခိုင္ျပည္ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ရာဇာ၏ ဦးေဆာင္မူျဖင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အမ်ားအျပားကို ေပါင္းစည္းျပီး တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ရာဇာရွိစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္တြင္ အင္အား အၾကီးဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ ပါတီ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အင္အား အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း” ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိသလဲ
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ကို မလြတ္တန္းဆုပ္ကုိင္ထားသည့္ အေျခခံေပၚတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၁) ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ေၾကညာခ်က္တြင္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရသည္။
၁။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းသာ ေဆြးေႏြးမည္။
၂။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ပဏာမေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ ပဏာမအဆင့္ၿပီးစီးပါက အစိုးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
ဤဖိတ္ၾကားခ်က္သည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း” ဆိုၿပီး “လံုးခ်ထား” သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) တို႔၏ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုး အေရးဦးတည္သည့္ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး” ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသာ “ကြက္ၿပီး” ဖိတ္ေခၚထားခ်က္ ျဖစ္သည္။
ဖိတ္ေခၚခ်က္တြင္ ေဖၚထုတ္ထားသည္မွာလည္း “လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား” ဟူ၍သာ ေယဘုယ်အဆန္ဆံုး ေဖၚျပထားသည္။
ဤဖိတ္ေခၚခ်က္သည္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ “တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းလာလွ်င္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မျပဳရန္ႏွင့္ (UNFC) အေနျဖင့္သာ စုစည္းေဆြးေႏြးရန္” ဟူေသာ အခ်က္ကို ပယ္ခ်ထားသည္။
ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း တိတိက်က် ရွင္းလင္းေပးဖို႔လိုသည္။
ပဏာမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္မွာ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္သလဲ။
ပဏာမအဆင့္ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ၿပီးဆံုးမွာလဲ။ ဘယ္လိုကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွ ပဏာမအဆင့္ၿပီးဆံုးသည္ဟု သတ္မွတ္မွာလဲ။ ပဏာမအဆင့္ၿပီးဆံုးၿပီးလု႔ိ မည္သူက/မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူ သတ္မွတ္မွာလား) သတ္မွတ္မွာလဲ။
ပဏမအဆင့္ ၿပီးစီးမွ အစိုးရဘက္က “ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းမည္” ဆိုသည့္ အခ်က္ကလည္း တစ္ဖက္သတ္ လက္ဦးမႈယူထားသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ ဘာေၾကာင့္ ပဏာမအဆင့္ၿပီးစီးမွ ဖြဲ႔စည္းရတာလဲ။
ထိုေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မည္သူေတြပါဝင္မွာလဲ။ မည္မွ်ပါဝင္မွာလဲ။ မည္သူက ဖြဲ႔စည္းေပးမွာလဲ။ လက္ရွိအစိုးရက ဖြဲ႔စည္းေပးမွာလား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးမွာလား။ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးမွာလား။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးမွာလား။
“ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္” မ်ားဆုိသည္မွာ ဘာေတြကိုေျပာတာလဲ။ တည္ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ဆိုလိုတာပါသလား သို႔တည္းမဟုတ္ လက္နက္အပ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုလိုပါသလား။
“တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းသာ” ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဖိတ္ေခၚေနသည္ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမည္သို႔ တုန္႔ျပန္ၾကမည္နည္း။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔၏ “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ” ႏွင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း” မည္သုိ႔မည္ပံု ကြဲျပားျခားနားပါသနည္း။
“ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း” တြင္ (က) မွ (စ) အထိ ေဖၚျပထားသည့္ “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္” မ်ားအရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ဤဖိတ္ေခၚခ်က္အေပၚ မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။
အကယ္၍ (အကယ္၍) ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္၊ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာပါ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ကၽြန္မအေနႏွင့္ ကိုယ္စြမ္း႐ွိသမွ် ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္” ဆိုေသာအခ်က္ကို အသံုးခ်ၿပီး လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ပဏာမအဆင့္ၿပီးစီးလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟူသည့္ “ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႔အစည္း” တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါဝင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့လွ်င္/ဖိတ္ၾကားခဲ့လွ်င္ မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္ပါမည္နည္း။
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ “စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ” တက္ေရာက္ရန္ လက္ေတြ႔ဖိတ္ၾကားမႈလည္းရွိေနခဲ့သည္ မဟုတ္ပါသေလာ။
(၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ၁၉)
ချင်းပြည်တွင် ALP ဆက်ဆံရေးရုံးထားရှိမည့်ကိစ္စ ချင်းပါတီများက သမ္မတထံ ကန့်ကွက်စာပို့
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ နှင့် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တို့အကြား သဘောတူညီချက်အရ ချင်းပြည် နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ALP ဆက်ဆံရေးရုံးထားရှိမည့်ကိစ္စ ကန့်ကွက်ကြောင်း ချင်းနိုင်ငံ ရေး နှစ်ပါတီက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်ထံ ယနေ့ စာရေးပေးပို့လိုက်ကြသည်။
၄င်းတို့၏ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့ သဘောတူညီချက် ၅ ချက်တွင် ပါ၀င်သည့် ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ALP ဆက်ဆံရေးရုံးထားရှိရေး သဘောတူညီချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ချိုး ဖောက်ခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ချင်းအမျိုးသားပါတီ (CNP) နှင့် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (CPP) တို့က ကန့်ကွက်စာပို့ လိုက် ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မိတ္တူကို လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံး၏ ဥက္ကဌ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ချင်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်၊ ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နှင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ခုံရုံး ဥက္ကဌ တို့ကိုလည်း ပေးပို့ထား ကြောင်းသိရသည်။
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၂) ဦးရှိန်းထွန်းက “ ချင်းအမျိုးသားပါတီ(CNP) နဲ့ ချင်းတိုး တက်ရေးပါတီ(CPP) တို့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ပြည်နယ် အဆင့်သဘောတူ လက်မှတ်ရေး ထိုးထားတဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဆက်ဆံရေးရုံး ထားရှိမယ့်အစီအစဉ်ဟာ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ ချင်း နဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတို့ အကြား မလိုလားအပ်တဲ့ နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှုလွဲမှားစေနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ခြင်း တို့ ကြောင့် အလေး အနက်ကန့်ကွက်ပါတယ်’’ ဟု ခိုနူမ်းထုန်သတင်းဌာနကို ပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး ALP အနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဆက်ဆံရေးရုံးမထားဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ် တနေ ရာရာမှာ ထားရှိသင့် ကြောင်း ဦးရှိန်းထွန်းကပြောသည်။
“ ALP အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ စစ်တွေ၊ သန်ထောင် လိုမျိုး တနေရာရာ ရခိုင်ပြည်နယ် ထဲမှာ ဖွင့် သင့်တာပေါ့၊ အခုက နယ်ကိုကျော်ပြီး ဖွင့်တာဖြစ်နေတယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ သွေဖယ် ဆန့် ကျင်နေတဲ့သဘောမှာရှိတယ် ၊ မလုပ် သင့်မလုပ်အပ်တဲ့အရာပါ’’ ဟု ဦးရှိန်းထွန်းကပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေ ပြီး ချင်းမျိူးနွယ်စု မြို(ခေါ်) ခူမီး၊ ဒိုင် လူမျိုးများ အများစုနေထိုင်ကြသည်။ ထို့အပြင် ပလက်ဝမြို့နယ်သည် အိန္ဒိယ -မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကနေ အကောင်အ ထည်ဖော်နေသော ကုလားတန်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၏ အချက်အခြာ ကျရာဒေသတခု လည်းဖြစ်သည်။
ယခုကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းဆောင် ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ယာယီ ရုံးထိုင်လိမ့်မည်ဟု ပြောသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ခူမီးချင်းတိုင်းရင်းသားများကလည်း အင်တာနက်အွန်လိုင်းမှတဆင့် အချိပ်အဆက် များလုပ်ဆောင်ပြီး ဒေသခံလူထုတွေထံ လက်မှတ်ကောက်ခံပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ ကန့်ကွက် စာပို့ရန် စီစဉ်နေကြောင်း အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင်နေထိုင်သူ ခူမီးတိုင်းရင်းသား ကိုလှထွန်းက ခိုနူမ်းထုန် ကိုပြောသည်။
“ ပလက်ဝ ဆိုတာ ကျနော်တို့ ခူမီးနယ်ပေါ့ကွာ၊ သူတို့ရုံးစိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သွားစိုက်သင့် တာပေါ့၊ ကျနော်တို့ ခူ မီးနယ်မှာ ရုံးစိုက်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး၊ အခုကျနော်တို့ ကန့်ကွက် မယ့်စာတွေပေါ့နော်၊ ကန့်ကွက် မယ့်ဟာတွေကို ကျနော်တို့လုပ်နေတယ်လေ၊ အခုလောလောဆယ် တော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ် ဆောင်ကြမလဲဆို တဲ့ဟာကို Group Mail မှာ ဆက်သွယ်နေကြတုန်းဘဲ’’ ဟုသူကပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ( CNF) တို့အကြား ပြည်နယ် အဆင့် သဘောတူညီ ချက်အရ ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တပ်စခန်းချမည့် ဒေသဖြစ်နေသော်လည်း ချင်းအမျိူးသား တပ်ဦးမှ ALP ရုံးထား မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးကြောင်းသိရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်ကို ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ (ALP) က လက်ခံပြီး နှစ်ဘက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း အဆိုပါ ပါတီ ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းဇော်က ALP နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး လိုကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က စာရေးသား ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် အပေါ် တွင် ALP က လက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ALP ပါတီဝင်များ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ALP)
“ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတဲ့အရာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ သဘောထားရှိတယ်” ဟု ALP ပါတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်အား ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် ပါတီ ဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီး အကြောင်းပြန်မည်ဟု ALP က အစိုးရအား တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
“ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအတွင်းမှာ ဆွေးနွေးရဦးမယ်။ ပြီးမှ ဘယ်အချိန်မှာတွေ့မယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ တွေ့မယ်၊ ဘယ်နှယောက် တွေ့မယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြန်မယ်လို့ စာပြန်ရေးထားတယ်” ဟု ပါတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
ပါတီဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးအား လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားဒေ့ချ် ၃ နိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် အခြေစိုက် လှုပ်ရှားလျက်ရှိသော ALP သည် တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
အစိုးရ အဆက်ဆက်အား နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ခဲ့သည့် ALP တွင် ပါတီဝင်နှင့် လက်နက်ကိုင် အင်အား ၃၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခိုင်ရဲခိုင်က ဆိုသည်။
ပြည်တွင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်အတွက် ALP အား ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
“ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲဖို့၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့ အခုလို အပစ်အခတ် ရပ်စဲတယ်။ ဒီကနေတဆင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုရင်တော့ ကြိုဆိုပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
၁၉၇၆ ခုနှစ် မေလ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု (မဒတ) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည် ALP ကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ အကူအညီဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် တနေရာတွင် ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဦးခိုင်မိုးလင်းက စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော် – တောင်ပိုင်း (SSA – S) နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး KNU၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်။
ထို့အပြင် ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) တို့ကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေနွေးရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။
သို့သော် ရ လ ကျော်ကြာ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှင့် အစိုးရတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုမှာ မအောင်မြင်သေးဘဲ ဆက်လက်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရန်နှင့် တိုက်ပွဲများ လျှော့ချရန်သာ သဘောတူညီမှု ရရှိထားသည်။
ရခိုင်ပြည် လွှတ်မြောက်ရေး ပါတီကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းပြီ
အိႏၵိယ- ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရးပါတီကို ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရမွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။
ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရး (၂) ခိုင္သုခက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းမူ အေပၚ နိရဥၥရာသို႕ ယခုလုိ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
" ဟုတ္ပါတယ္။ သူတို႕က ဒီလ ၂၃ ရက္ေန႕က စာေရးျပီး ကမ္းလွမ္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ေကာ္မီတီ ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္က စာေရးျပီး ကမ္းလွမ္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါတီ ဥကၠဌၾကီးဆီကို လိပ္မူတပ္ျပီး အေၾကာင္း ၾကားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သို႕ ကမ္းလွမ္းမူ အေပၚ ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး ပါတီအေနႏွင့္ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
" အခုလို ကမ္းလွမ္းလာမူ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္ကေတာ့ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ မ်ားမၾကာမွီ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္ကလည္း အဲဒီကမ္းလွမ္းလာမူ အေပၚမွာ တုန္႕ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းသည့္စာအား ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ဒုဥကၠဌ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္မွ တဆင့္ ကမ္းလွမ္းလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုကဲ့သို႕ ျငိမ္းခ်မ္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းလာမူ အေပၚ သေဘာထား အျမင္ကို ေမးၾကည့္ရာ သူက ယခုလို ဆက္္ေျပာသည္။
" အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္လို ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ေျပာလို႕ မရေသးဘူး။ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွ သိရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္က သေဘာထား၊ သူတို႕ဘက္က သေဘာထားေတြကို သိျပီးမွ ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ ေျပာႏိုင္မွာပါ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေျပာဖို႕ခက္ပါတယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏လက္ေအာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ရွိျပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ဗမာ အစုိးရအအား ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီျပီး ဆင္ႏြဲေနေသာ ပါတီ တရပ္ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး ပါတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ကို ၁၉၇၃-၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ေကာ္မူးရာတြင္ ဗိုလ္ခိုင္မိုးလင္းက ဦးေဆာင္ျပီး တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပါတီ ဥကၠဌ ခိုင္မုိးလင္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ၁၉၇၆ တြင္ ကရင္နီ၊ ရွမ္္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားကို ျဖတ္ျပီး ရဲေဘာ္ ၁၂၀ ႏွင့္ အတူ ရခိုင္သို႕ ခ်ီတက္စဥ္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ဧျပီႏွင့္ ေမလတြင္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲေပါင္း ရာေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုက္ပြဲမွ မလႊတ္ေျမာက္ႏိုင္သျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ပါလာေသာ ပစၥတုိျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို မိမိ လုပ္ၾကံကာ သူရဲေကာင္းပီသစြာ အသက္ေပးဆပ္ သြားခဲ့သည္။
ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ ဥက္ကဌ ခိုင်ရဲခိုင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ တက္လာျပီးတ့ဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး KNU၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း SSA(S)၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ KIO နဲ႕ အစိုးရတုိ႕ အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္မွာ လူပ္ရွား တိုက္ပြဲ ၀င္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီနဲ႕ေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ကမ္းလွမ္းတာ၊ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတာေတြကို မၾကား ရေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးသြားဖို႕ အလားအလာ ဘယ္လို ရွိေနသလဲ ဆုိတာ သိရွိရေအာင္ ALP ပါတီ ဥကၠဌၾကီးလည္းျဖစ္၊ ALA စစ္ဦးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ တဲ့ ခိုင္ရဲခိုင္ကို နိရဥၥရာမွ ေမာင္ရမၼာက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းၾကည့္တဲ့ အခါ
အခုထက္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို တရား၀င္ ကမ္းလွမ္းတာ မရွိေသးပါဘူး။ သူမ်ားကတဆင့္ ေျပာသံေတြ ေတာ့ ၾကားရတယ္။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္က ေ၀ဖန္သံေတြကို ၾကားရပါတယ္။
(တကယ္လို႕ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႕ ကမ္းလွမ္းလာရင္ ဥကၠဌၾကီးတို႕ ALP အေနနဲ႕ လက္ခံ ဖို႕ အေျခအေန ရွိပါလား။ ဘယ္လို အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါသလဲ။)
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ျဖစ္ေနၾကတာေတာ့ အမွန္ပါ။ ရခိုင္ျပည္ဟာ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္က စျပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္က စျပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္လာတာ ဒီေန႕အထိပါဘဲ။ ေျဖရွင္းလို႕ မရေသးပါဘူး။ အဲဒီလို ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႕လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ကမ္းလွမ္းရင္ ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္းဖို႕ ေဆြးေႏြးမွာပါ။
(ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုျပီးေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးက ကမ္းလွမ္းလာလို႕ ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို အခ်က္ေတြကို ALP အေနနဲ႕ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားဖို႕ မွာပါလဲ။)
အဆင့္ကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္ဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ အတြက္ က်ဆံုးသြားတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပန္လည္ ရရွိေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရမယ္။ မေျဖရွင္းႏိုင္ သေရႊ႕ေတာ့ ရခုိင္ျပည္ သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ ျပည့္စံုတဲ့ အခြင့္အေရးကို ရရွိႏိုင္တယ္လို႕ ေျပာဆိုႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြကို ရေအာင္ထိကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုက္ပြဲ ၀င္သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဥကၠဌၾကီးတို႕ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရ ပါတီ (သို႕) ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ အေပၚ တစံုတရာ ကမ္းလွမ္းမႈ မလုပ္ခဲ့ရင္ ဥကၠဌၾကီၤးတို႕ အေနနဲ႕ ေရွ႕ကို ဘာေတြ ဆက္လုပ္သြားဖို႕ အစီအစဥ္ ရွိပါသလဲ။)
ကၽြန္ေတာ္တို႕က သြားေနက် လမ္းအတိုင္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ ဆင္ႏြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ယံုၾကည္ထားတာက လက္ နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲသာလွ်င္ အဆံုး အျဖတ္ ေပးႏိုင္မယ့္ အေျဖ ျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာျပည္သူေတြ လိုအပ္တဲ့ အတိုင္း အတာ အဆင့္ထိ ကို မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ အဆင့္ တစ္ခုထိ မေရာက္ရိွဘဲ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒီကေန႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆိုတာကလည္း တကယ့္ အႏွစ္သာရ မပါတဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရွ႕ကို မတက္လွမ္းႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲနဲ႕သာ အေျဖထြက္ဖို႕ ျဖစ္တယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။ အခု ၀တပ္ဖြဲ႕(၀တဖ) ကို ၾကည့္ပါ။ ၀ေတြဟာ လက္နက္ကိုင္ အင္အားကို တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ သူတို႕နယ္ေျမကို သူတို႕ ထိန္းသိမ္းထားျပီး သူတို႕ အာဏာကို တည္ေဆာက္ထား ႏိုင္တယ္။ အဲဒါဟာ အနီးကပ္ ဥပမာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ေတြ ဘာကို လိုခ်င္လဲ။ လိုခ်င္တာကို လက္နက္နဲ႕ ေျဖရွင္းမွ ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကို ေဆြးေႏြးဖို႕ မကမ္းလွမ္းရင္လည္း ျပႆနာ မရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မရွိရင္ စစ္ေရးကိုဘဲ ႏိုင္သေလာက္ ဆက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ က်ဴးေက်ာ္ သူေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဆက္လက္ တိုက္ပြဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
( ဒီကေန႕ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ျငိိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ အေပၚေကာ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။)
ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တာက ဒီလိုရွိပါတယ္။ သူတို႕နဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ အၾကား တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိလာျပီ။ အခု လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲ သ႑ာန္ကို ၾကည့္ရင္ ျပည္တြင္းက ဒီမိုကေရစီအင္ အားစုေတြရယ္၊ ျပီးေတာ့ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြရယ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ၀ိုင္းျပီးေတာ့ တိုက္လာၾကတဲ့ အခါမွာ အခုဆိုရင္ စစ္အုပ္စု ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ လက္ရွိ အစိုးရမွာ ေဘးက်ပ္ နံက်ပ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အက်ပ္အတည္းေတြ အရမ္းဆိုက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးအရ ရွင္သန္ေရးနဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးတို႕ အတြက္ ယာယီ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲတဲ့ သေဘာ၊ ေျပျငိမ္းတဲ့ သေဘာလို႕ ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္းတာမ်ိဳး မရွိေသးဘူး။ စစ္အင္အားကိုဘဲ သူတို႕ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ သြားလိမ့္မယ္လို႕ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္ပါတယ္။
( ဥကၠဌၾကီး အေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္သူေတြကို ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။)
ရခိုင္ျပည္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္လပ္မူ ဆံုးရွံဳးျပီး ဆင္းရဲဒုကၡေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ လူငယ္ေတြက အခုအခါ ျပည္တြင္းမွာ အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့့္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လႈပ္ရွားမူေတြ ျပဳလုပ္လာေနၾကတာကို ေတြ႕ေန၊ ျမင္ေန၊ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒါဟာ အားရစရာေကာင္းပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျမက ထြက္တဲ့ သဘာ၀ သံယံဇာတ ပစၥည္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူေတြ ခံစားခြင့္ မရွိဘူး၊ အဲဒါေတြဟာ ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ မရွိလို႕ ဒီလို ျဖစ္ရတာကို ျပေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ခံစားခြင့္ မရွိတဲ့ အတြက္ ရခုိင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ တစ္ေန႕ျပီး တစ္ေန႕ ဆင္းရဲလာတယ္။ ဒါဟာ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေတြမွာ အရာရာအားလံုး ဆံုးရွံဳးေနတာကို ညႊန္ျပေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဆီကထြက္တဲ့ ဆန္ကို ကိုယ္မစားရတ့ဲ ဘ၀၊ ကိုယ့္ဆီက ထြက္တဲ့ သဘာ၀ သယံဇာတေတြကို ကုိယ္တို႕ သံုးပိုင္ခြင့္ မရတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးနဲ႕ ဆက္လက္ သြားေနၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရခိုင္ျပည္သူေတြဘ၀ ဒီထက္ ဆိုး၀ါးျပီး အဆံုးမွာ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္သြား ဖို႕ဘဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႕ အတြက္ ရဟန္းရွင္လူအားလံုး၊ ရခုိင္ျပည္သူ ကေလး လူငယ္ေတြကပင္ အစ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ၾကရမယ္။ အဲဒီမွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဘ၀သစ္ကို တည္ေဆာက္လို႕ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘ၀က မ်က္ရည္စက္လက္နဲ႕ ဆက္လက္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူ ရခုိင္ျပည္သူအေပါင္းတို႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါ။ညီညြတ္ၾကပါလုိ႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ (ျပီး)
.: နိရဥၥရာမွ တနဂၤေႏြ, ဇူလိုင္ 29, 2012